စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၀ ) ( ဘာကြောင့် မုန်းနေကြသလဲ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၀ ) ( ဘာကြောင့် မုန်းနေကြသလဲ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၀ ) ( ဘာကြောင့် မုန်းနေကြသလဲ )
Posted by Foreign Resident on May 1, 2012 in Think Different | 54 comments
အင်း ဒီ Post ကတော့ နာနာ(သံတွဲ) ရဲ့
” မြန်မာ မွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအားမုန်းတီးသူများသို့ ” နှင့်
” ဘာကြောင့် မုန်းနေကြသလဲ ” လို့မေးထားတာလေးကို
အဘ တွေးမိသလောက် မြင်မိသလောက်
ကြိုးစားပြီး ဖြေကြည့်တာပါကွယ် ။
အဘ အမြင်နော် ၊ လွဲနိုင်ပါတယ် ။
ပထမ အနေနှင့် ယထာဘူတ ကျကျ ဆန်းစစ်ရရင် ၊
မုန်းတီးနေကြတယ် လို့မဆိုသာပေမယ် ၊
ကြောက်လန့် ဖယ်ကြဉ် နေကြတာကတော့ ၊
အမှန်ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်ကွယ့် ။
( ထုတ် မပြော ရင်သာရှိရမယ် )
ဒုတိယ အချက်ကတော့ ၊ အဲလို မုန်းတီးနေတာက ၊
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံထဲရဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူးကွဲ့ ။
နိုင်ငံတစ်ကာမှာလည်း ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်ကွယ့် ။
( အကောင်းဖက်က ဖြေသိမ့်မယ် ဆိုရင်တော့
ဗမာပြည်က — ဘာသာဝင်တွေကမှ ကွက်ပြီးဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပဲ
နိုင်ငံတကာ သဘောဆောင်တဲ့ အတွက်
ဗမာပြည်က — ဘာသာဝင်တွေက ဘာမှ
ထူးပြီး ပြဿနာဖြစ်နေတာ ၊ ဆိုးနေတာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ် )
ကမ္ဘာ နှင့် အနှံ့ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာရတယ် ဆိုတာ ၊
တွေးကြည့် အဖြေရှာကြည့်တော့ ၊
အဘ က သြဇီမှာ နေတဲ့သူဆိုတော့ ၊
သြဇီ က ဥပမာလေး တစ်ခုပဲ ပေးကြည့်မယ်နော် ။
မြန်မာပြည်က ဥပမာ ကော ၊ မရှိဘူးလား ဆိုတော့ ၊
မှန်တာပြောရရင် ၊ ရှိတာပေါ့ကွယ် ၊
ဒါပေမယ့် ၊ အရမ်း ဒဲ့ဒိုးကြီးလည်း ဖြစ်သွားမယ် ။
အခု Post ကိုလည်း အရမ်း အထိမခံဆုံးဖြစ်တဲ့ ၊
ဘာသာရေး ကိစ္စ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
တိုက်ခိုက်ဖို့ ဦးတည်ချက် လုံးဝ မပါစေရပဲ ၊
အဖြေရှာဖို့ ဦးတည်ချက် နှင့်ပဲ ရေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
မြန်မာပြည်က ဥပမာ ကို ရှောင်ပြီး ၊
နဲနဲဝေးတဲ့ ၊ အရမ်း ဒဲ့ဒိုးကြီးလည်း မ ဖြစ် မယ့် ၊
သြဇီ က ဥပမာလေး နှင့်ပဲ ရှင်းပြပါရစေ ။
နောက် အရေးကြီးတဲ့ တစ်ချက်ကလည်း ၊
ထင်ရှားတဲ့ ရွာသားများထဲမှာလည်း ၊
မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေ ပါနေတာကို တွေ့ရတော့ ၊
သာသာလေး ပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီ အပြင် အဘ ရဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး လူမျိုးရေး Post နှစ်ခု ဖြစ်တဲ့
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၈ ) ( တိုင်းရင်းသား အရေး ) နှင့်
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၉ ) ( ဟဲဟဲ ၊ ဟဲဟဲ ) တို့ မှာကလည်း ၊
ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပြောပြီး / ရေးပြီး ၊
မြို့မေတ္တာကို ပိုပိုလျှံလျှံ ကို ခံယူထားပြီးပြီ ဆိုတော့ ၊
မြို့မေတ္တာကို တောင်းခံနေစရာ မလိုသေးတဲ့ အတွက် ၊
ဒီတစ်ခါ ဘာသာရေး Post ကိုတော့ သာသာလေးပေါ့ ၊ ဟဲဟဲ ။
ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် “ ဂယ်လီပိုလီ စစ်ပွဲ ” ( Battle of Gallipoli )
အကြောင်းလေး ရှင်းပြပါရစေ ။
အဲဒီ ဂယ်လီပိုလီ စစ်ပွဲ ဟာ ၊ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့
ထင်ရှားတဲ့ စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
( Ref ; http://en.wikipedia.org/wiki/Gallipoli_%28battle%29 )
၁၉၁၅ နှင့် ၁၉၁၆ ခုနှစ် ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ
တူရကီ နိုင်ငံရဲ့ အရေးပါတဲ့ ဂယ်လီပိုလီ ဒေသကို သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်
ဗြိတိသျှ ပြင်သစ် သြဇီ နယူးဇီလန် မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့များ ( Allied Force ) ကတဖက်
အော်တိုမန် အင်ပါရာ ( တူရကီ လူမျိုး / မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် ) ကတဖက်
ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကမ်းတက်သိမ်းပိုက်ရေး စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီစစ်ပွဲစဉ် အတွင်းမှာ ၊ မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့များ ဖက်မှ
စစ်သား တစ်သိန်း လေးသောင်း ကျော် သေကြေ ဒါဏ်ရာရခဲ့ပြီး ။
အော်တိုမန် တူရကီ တပ်ဖွဲ့များ ဖက်မှ ၊
စစ်သား နှစ်သိန်း ငါးသောင်း ကျော် သေကြေ ဒါဏ်ရာရခဲ့ ပါတယ် ။
အော်တိုမန် တူရကီ များဖက်မှ အကျအဆုံး ပိုများပြားပေမယ့် ၊
နယ်ခံ အော်တိုမန် တူရကီ တပ်ဖွဲ့များ ( မွတ်ဆလင် ) မှ ၊
ဗြိတိသျှ ပြင်သစ် သြဇီ နယူးဇီလန် မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့များ ( ခရစ်ယာန် ) ကို ၊
အောင်မြင်စွာ တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
ဂယ်လီပိုလီ စစ်ပွဲ ၊ ကျဆုံး ဒါဏ်ရာရ စာရင်း ။
အရေးကြီးဆုံး အချက်က ၊
အဲဒီ ဂယ်လီပိုလီ စစ်ပွဲစဉ် အတွင်းမှာ
သြစတေလျှ နိုင်ငံသား နှစ်သောင်း ရှစ်ထောင် ကျော် သေကြေ ဒါဏ်ရာရခဲ့ပါတယ် ။
သြစတေလျှ နိုင်ငံ သမိုင်းမှာ
သြစတေလျှ နိုင်ငံသား အများဆုံး သေကြေ ဒါဏ်ရာရခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
သြစတေလျှ နိုင်ငံသားများအတွက် အကြေကွဲရဆုံး စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
အဲဒီ စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ April လ ၂၅ ရက် ကို
သြစတေလျှ ၊ နယူးဇီလန် နှစ်နိုင်ငံလုံးက ၊
ANZAC Day ( national day of remembrance ) ဆိုပြီး
( အာဇာနည်နေ့ နှင့် တပ်မတော်နေ့ နှစ်ခုပေါင်း ဆန်ဆန် )
နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက် သတ်မှတ်ပြီး ၊
အကြီးအကျယ် ကျင်းပကြပါတယ် ။
သြစတေလျှ နိုင်ငံသားများအတွက် အဲဒီ ဂယ်လီပိုလီ စစ်ပွဲ ဟာ
သြစတေလျှ နိုင်ငံ သမိုင်းမှာ အနာကျင်ရဆုံး အကြေကွဲရဆုံး စစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုမှပဲ လိုရင်းကို ပြောတော့မယ်နော် ။
သြစတေလျှ နိုင်ငံဟာ ချမ်းသာတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဦးဆောင်နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
ကမ္ဘာ မိသားစုကြီးမှာ တာဝန်သိတတ်တဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု အနေနှင့် ၊
ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်က ဘေးဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ ၊
နိုင်ငံရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ စစ်ရေး ဒုက္ခသည် ( Refugee ) တွေကို ၊
သူတတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ အလျှောက် ၊
နှစ်စဉ် ထောင်သောင်းချီပြီး ကူညီပေး လက်ခံပေးနေပါတယ် ။
လက်ခံတယ် ဆိုလို့ လွယ်လွယ် မမှတ်နှင့်နော် ။
လက်ခံပြီးသမျှ ဒုက္ခသည် ( Refugee ) အားလုံးရဲ့ ၊
စား ဝတ် နေ ရေးအပြင် ၊ နေစရာ အိမ် ၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ၊
ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး အားလုံးကို ၊ သြစတေလျှ နိုင်ငံ ( အစိုးရ ) က
( ကံဆိုးရင် ) တစ်သက်လုံး တာဝန်ယူလိုက်ရတာပါ ။
လက်ခံပြီးသမျှ ဒုက္ခသည် ( Refugee ) အားလုံး ကိုလည်း ၊
သြစတေလျှ မှာနေပြီး ၂ နှစ်ပြည့်ရင် ၊
သြစတေလျှ နိုင်ငံသား ခံယူခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေခွင့်ပေးပြီး ၊
စာမေးပွဲ အောင်ရင် သြစတေလျှ နိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးရမှာပါ ။
စာမေးပွဲ ဆိုလို့ ၊ တော်တော်ခက်မယ် မထင်နဲ့ အောင်ချက်က ၉၆% တဲ့ ။
အဘ မှာ ရေးသာရေးရတယ် ၊
သြစတေလျှ ဒုက္ခသည် ( Refugee ) အကြောင်းရေးရတာ ခပ်လန့်လန့်ရယ် ၊
အဲဒီအကြောင်းကို အဘထက် ပို သိမယ့်သူများ ရှိမယ်ထင်တယ် ၊
အဘရေးတာ မှားယွင်းတာများ ပါခဲ့ရင် ၊ ခွင့်လွတ်ပြီး ပြင်ဆင်ပေးကြပါ ခမျ ။
ထားပါလေ ၊ သြစတေလျှ နိုင်ငံ ( အစိုးရ ) ရဲ့ စွန့်စားပြီး ၊
ဒုက္ခသည် ( Refugee ) တွေအပေါ်ထားမိတဲ့ စေတနာကို ပြောပြတာပါ ။
အဲ ၊ ဒုက္ခသည် အများစုကြီး ကတော့ ၊
ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ ၊ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေပဲပေါ့ ။
ခက်တာက အဲဒီ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်တွေကလည်း ၊
တခြား မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတွေ ကိုကျ လုံးဝ လုံးဝ ကို မသွားချင်ကြပဲ ။
ခရစ်ယာန် နိုင်ငံလေးတွေကိုမှ ကွက်ပြီး အရမ်း အရမ်း ကို လာချင်တာပဲတဲ့ကွယ် ။
အထူးသဖြင့် ကြီးလေးကြီး လို့ ခေါ်ကြတဲ့ US, UK, Australia, Canada ပေါ့ ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ နိုင်ငံကြီးတွေ ခမျာမှာလည်း ၊
နိုင်ငံကြီး ပီသစွာနှင့် ၊ လက်ခံပေးရတာပေါ့ကွယ် ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ လူနည်းစု ဖြစ်နေတုန်းကတော့ ၊ ဘာမှပြဿနာ မရှိသလိုပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ထိုက်သင့်လောက်အောင် လူနဲနဲ စုမိလာတဲ့ အခါကျတော့ ၊
ပြဿနာ က စလာပါပြီ ။
အဘ နေတဲ့ Sydney မြို့မှာ
Auburn ဆိုတဲ့ အရပ်ဟာ မွတ်ဆလင် တွေ အများစုနေတဲ့ အရပ်ပေါ့လေ ။
အထူးသဖြင့် တူရကီကလာတဲ့ မွတ်ဆလင် တွေ အများစုနေတဲ့ အရပ်ပေါ့ ။
အဲဒီမှာလေ ၊ သူတို့က သြစတေလျှ နိုင်ငံ မှာ အကြီးဆုံး ဆိုတဲ့
မွတ်ဆလင် ဗလီ ကြီးကို ဆောက်ကြတယ်တဲ့ ။
အဲဒီ အထိကတော့ ဘာမှ မထူးဆန်းသေးပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ ထူးဆန်းတာက ၊ အဲဒီ အကြီးဆုံး ဗလီ ကြီး ကို နာမည်ပေးလိုက်တာက ၊
” ဂယ်လီပိုလီ ဗလီ ” ပါတဲ့ ခင်မျာ ၊ ” ဂယ်လီပိုလီ ဗလီ ” ပါတဲ့ ။
အော်တိုမန် အင်ပါရာ ( တူရကီ လူမျိုး / မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် ) များက
သြစတေလျှ နိုင်ငံသား ( ခရစ်ယာန် ) နှစ်သောင်း ရှစ်ထောင် ကျော်ကို သေကြေ ဒါဏ်ရာရစေခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲ ။
သမိုင်းမှာ သြစတေလျှ နိုင်ငံသား တွေ အများဆုံး သေကြေ ဒါဏ်ရာရခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲ ။
သြစတေလျှ နိုင်ငံသားများအတွက် အနာကျင်ရဆုံး အကြေကွဲရဆုံး စစ်ပွဲ ။
အဲဒီ စစ်ပွဲနာမည်ကိုမှ ၊ အဲဒီ အကြီးဆုံး ဗလီ ကြီး ကို နာမည်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ ။
သူတို့ကို နေထိုင်ခွင့်ပေး ၊ လက်ခံစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ၊
သြစတေလျှ နိုင်ငံ ရဲ့ မျက်နှာကို တစ်ချက်လေး မထောက်တော့ဘူးလားဗျာ ။
ပေးစရာ နာမည် ဒီလောက်ရှားသလားဗျာ ။
သြစတေလျှ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အသည်းနှလုံး ကို
ဓါး နှင့် ခွဲ ၊ ဆား နှင့် ပက်လိုက်သလိုပါပဲ ။
သြစတေလျှ နိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ
မစဉ်းစားတော့ဘူးလား ဗျာ ။
( Ref ; http://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_Gallipoli_Mosque )
ပုံစံက မြန်မာပြည် မန္တလေး မြို့လည်မှာ တရုတ်လူမျိုးတွေက ၊
” တရုတ်ပြေးမင်းကြီး နရသီဟပတေ့ ” ဆိုတဲ့ နာမည်နှင့်
တရုတ် ဘုံကျောင်း အကြီးကြီး လာဆောက်သလို ဖြစ်နေပြီ ။
အထက်ပါ အခြေအနေမျိုးတွေကြောင့် အမုန်းခံ ရတာဆိုရင်တော့ ၊
မုန်းတဲ့သူမှာ အပြစ်မရှိလှဘူးလို့ ၊ အဘ ရိုးရိုးလေး ထင်မိပါတယ် ။
အမုန်းခံရတဲ့သူကသာ ၊ သူတပါးကို စွပ်စွဲ ရန်လို မနေပဲ ၊
ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ် မြင်အောင် ကြည့်သင့်တယ် ထင်တာပဲ ။
အဲဒီ ဂယ်လီပိုလီ ဗလီ ကြီးဟာ အဘ အိမ်နှင့်
Sydney မြို့လည် နှင့်ကြားက ရထားလမ်းဘေးမှာ ရှိနေတော့ ၊
အဘ ရထား စီးပြီး ဖြတ်တိုင်း ၊ အဲဒီ ဂယ်လီပိုလီ ဗလီ ကြီးကို တွေ့တိုင်း ၊
အခုမှ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရောက်လာတဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေ နှင့်
လက်ခံ ကူညီခဲ့ကြတဲ့ သြစတေလျှ နိုင်ငံသားတွေ ရဲ့
အတွေးအခေါ် ၊ အပြုအမူတွေကို ယှဉ်တွဲ စဉ်းစားမိတယ် ။
( ဒါတောင် သြစတေလျှ မှာ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေ က
လူနည်းစုပဲ ရှိသေးတာနော် )
အဘကို အဲဒီအကြောင်းကို သြဇီ နိုင်ငံသား အဖြူတစ်ယောက်က ၊
ခံစားချက် အပြည့်နှင့်ပြောတာကို နားထောင်ဘူးတယ် ။
အဲဒီလိုပဲ အဘ သူငယ်ချင်း သြဇီမှာရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်
သြဇီ နိုင်ငံသား ခံယူထားတဲ့ မြန်မာ မွတ်ဆလင် တစ်ယောက်က
မှတ်ချက်ပေးတာကိုလည်း ကြားခဲ့ရတယ် ။
” ဒီလောက်တောင် ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး စစ်မှန်ချင်တဲ့
သြဇီတွေ ခံကြပေါ့ ” တဲ့ ။
သြော် ၊ လောကကြီးမှာ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှု နှင့် မထိုက်တန်တဲ့ ၊
လူမျိုး ၊ ဘာသာ များ ရှိနေသလား ပေါ့လေ ။ တကယ့်ကိုလဲ စိတ်မကောင်းလဲ ဖြစ်မိပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ပြောစရာ တစ်ခုက စလာပါပြီ ။
တာဝန် မယူရဲ ၊ ခေါင်းရှောင်ချင်တဲ့ စကားလုံးလေး တွေပါ ။
ဘာတဲ့ ၊ ” အဲဒါ သားသား လုပ်ထားတာ မဟုတ်ရပါ ၊
သားသား က အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ Innocent လေးပါ ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ။
” ဝါးလုံးကို ချီးသုတ် မရမ်းပါနှင့် ” ဆိုတဲ့ အကာအကွယ်လေးတွေ ။
အဲဒီ ” သားသား လုပ်တာ မဟုတ် ၊
ထို့ကြောင့် သားသား အပြစ်ကင်းတယ် ” ဆိုတဲ့ Idea ဟာ ၊
ရာဇဝတ်မှု ကိစ္စတွေမှာတော့ မှန်ကန်ပေမယ့် ၊
လူ အစုအရုံး အဖွဲ့အစည်း လူမျိုး ဘာသာ အနေနှင့်ပြုလုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာတော့ ၊
ဘယ်လိုမှ မရှောင်လွဲသာပဲ ( ယဉ်ကျေးမှု အရ ) တာဝန် ရှိလာတတ်ပါတယ် ။
ဥပမာ ပေးရရင် ၊
လက်ရှိ ဂျာမန် ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ဂျူးတွေကို သတ်ခဲ့တာ သူ မဟုတ်ပါဘူး ။
လက်ရှိ ဂျာမန် ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ တရားဥပဒေ အရ အပြစ်ကင်းပါတယ် ။
ဒါပေမယ် ၊ ဟစ်တလာ ဦးဆောင်တဲ့ ဂျာမန်လူမျိုးများက ပြုခဲ့တဲ့ ၊
ဂျူးတွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေအတွက် ၊
လူယဉ်ကျေး တို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ ( ယဉ်ကျေးမှု ) အရတော့
သူ့မှာ သွယ်ဝိုက်ပြီး တာဝန် ရှိနေပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ၊ လက်ရှိ ဂျာမန် ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ
အခြေအနေ အချိန်အခါ သင့်တော်တိုင်းမှာ ၊
( ၁ ) ဂျူး တွေကို တောင်းပန်ပါတယ် ။
( ၂ ) ဟစ်တလာ ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရှုံ့ချပါတယ် ။
ဆိုလိုရင်းက “ သွယ်ဝိုက်ပြီး တာဝန် ရှိနေတဲ့ သဘောတရား ” ကို ပြောချင်တာပါ ။
ဂျာမန် တွေ ၊ ဂျူး တွေ ၊ ဟစ်တလာ တွေ အကြောင်းပြောချင်တာ မဟုတ်ပါ ။
နောက်ထပ် အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာ တစ်ခုထပ်ပေးရရင် ၊
အဘ ရဲ့ Post ” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၉ ) ( ဟဲဟဲ ၊ ဟဲဟဲ ) ” မှာ
( အဘ က ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ၊ ဗမာ လို့ပဲ ခံယူမိတဲ့ အတွက် )
ဗမာ လူမျိုးတွေက ၊ တိုင်းရင်းသား တွေ အပေါ် ပြုမိခဲ့တဲ့ အမှားများ ( ရှိခဲ့ရင် )
ကျေ ပါစေတော့ဆိုပြီး အဘ က တောင်းပန်ထားပါတယ် ။
နောက်တစ်ခု ၊ ” ဝါးလုံးကို ချီးသုတ် မရမ်းပါနှင့် ” ဆိုတဲ့ အကာအကွယ် ။
ဒီကိစ္စကလည်း ၊ တော်တော်လေး ရှောင်လွဲရခက်တဲ့ ကိစ္စပါ ။
အခု လက်ရှိ မြန်မာ့ တပ်မတော်ဟာ
ဟိုအရင် စစ်အစိုးရလက်ထက် ( ၁၉၈၈ – ၂၀၁၀ ) အတွင်း
စစ်တပ်က ပြုခဲ့တဲ့ ကိစ္စ တွေအတွက်
ပြည်သူက မုန်းတီးခြင်းကို ခံနေရရှာပါတယ် ။
စစ်သားထဲမှာ လူကောင်းတွေ မရှိဘူးလား ဆိုတော့ ၊
ရှိပါ့ဗျား ၊ အပြင်လူ သာမာန် ( average ) အရပ်သားထက်
ပို စိတ်ကောင်း ရှိတဲ့လူတွေ By Name နှင့်တောင် ရွေးထုတ်ပြလို့ ရသေး ။
( ဒီနေရာမှာ တစ်ခုလေး အသိအမှတ် ပြုပေးချင်တာက ၊
၁၉၈၈ မတိုင်မှီ မှာ စစ်ထဲဝင်တယ် ဆိုတာဟာ
ရွေးလုပ်ခဲ့ကြတာပါ ဆိုတာလေးပါ )
ထားပါတော့ ၊ အဲဒီ စစ်သား လူကောင်းများမှာလည်း ၊
အခုအခါမှာ ရောယောင်ပြီး ဝါးလုံး ချီးသုတ် အရမ်းခံနေရတာပါပဲ ။
ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင် ။ ဘယ်လိုမှ ရှောင်လွဲလို့ မရနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေပါ ။
( ဒီနေရာမှာ ကျနော် တရားတယ် မတရားဘူး ၊ မှန်တယ် မမှန်ဘူး ကို မပြောဘူးနော် )
ကဲ ၊ အခုလောက်ဆိုရင် ၊ အဘ ထောက်ပြချင်တဲ့ ၊
( က ) ဘာကြောင့် မုန်းတာလဲ ဆိုတာနှင့် ၊
( ခ ) မမုန်းစေချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို ၊
နဲနဲလေးလောက်တော့ ၊ သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ ။
( က ) အစွန်းရောက်နေတဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် မုန်းတာပါ ။
ဥပမာ ( ၁ ) ။ ။ ဘင်လာဒင် ။
ဥပမာ ( ၂ ) ။ ။ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေ ဘာသာပြောင်းရင်
Apostasy in Islam (Arabic: ارتداد ‎) ဥပဒေ တွေ ။
” Whoever changes his religion, kill him “,
တမာန်တော် မိုဟာမက် said
” ဘယ်သူမဆို ( မွတ်ဆလင် ဘာသာကနေ ) ဘာသာပြောင်းရင် ၊ သတ်စေ “
ဘာသာပြန်သူ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī ( ဆွန်နီ မွတ်ဆလင် ခေါင်းဆောင် )
( Ref ; http://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam )
( Ref ; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html )
စကားမစပ် ၊ အဘ ဟာ သင်္ဘောနှင့် ကမ္ဘာ အနှံ့ ရောက်နေတဲ့အတွက် ။
အစွန်းရောက်နေတဲ့ အပြုအမူ တွေ နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ၊
ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ( အများကြီး ) ရှိပါတယ် ။
သိပ် နစ်နစ်နာနာတွေ မဖြစ်စေချင် ၊
အပြစ်ရှာသလို မဖြစ်စေချင်တဲ့ အတွက် ၊
အရမ်း ဒဲ့ဒိုးဆန်တဲ့ ဥပမာ ကို မပေးပဲ ရိုးရှင်းတဲ့
ဘင်လာဒင် ဆိုတဲ့ ဥပမာ ကိုသာ ပေးလိုက်တာပါ ။
( ခ ) မမုန်းစေချင်ရင် တော့
( ၁ ) အဲဒီ အစွန်းရောက်တဲ့ အပြုအမှုတွေကို
ကိုယ်တိုင်က လျော့ချဖို့ ဦးဆောင် တိုက်တွန်းပြီး
( ၂ ) အစွန်းရောက်တဲ့ အပြုအမှုတွေ ပြုမူခံရသူတွေကိုလည်း
တောင်းပန် / စာနာသနားကြောင်း ပြပြီး ။
( ၃ ) အဲဒီ အစွန်းရောက်တဲ့ အပြုအမှုတွေကို ပြုလုပ်သူတွေရဲ့
လုပ်ရပ်ကို လူသိထင်ရှား ရှုံ့ချကြောင်း ပြောဆိုပေးရပါမယ် ။
( တကယ်ကို ရင်ထဲကပါပြီးမှ လုပ်ရမှာနော် ၊
လူနည်းစု ဖြစ်နေတုန်းလေးမို့ ယောင်ပြတော့ မလုပ်ပါနှင့် )
အင်းးး ။ စာလည်း သိပ်ရှည်သွားပြီကွယ် ။
အဘ ဟာ အခြေခံအားဖြင့် ၊ ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေး ခွဲခြားလိုစိတ် မရှိပါဘူး ။
စာရေးသူ နာနာ ( သံတွဲ ) က
” ဘာကြောင့် မုန်းနေကြသလဲ ” ဆိုပြီး အမေး ရှိလာလို့သာ ၊
ဒါမျိုးလေးတွေကြောင့် လို့ ထင်ပါတယ်လို့ ၊
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ထင်မြင်ချက်ပေးမိတာပါ ။
အဘ အမြင်လေးများ မှားရင် လိုရင် ၊ ထောက်ပြ ကြပါအုန်း ။
ထူးခြားတယ်လို့ ထင်မိတဲ့ Comment လေးတွေကို ၊
Hight Light ပြန် / ထပ် လုပ်ပေး ပါရစေကွယ် ။
မွတ်ဆလင် ကို မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေတင်မုန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး
ကမ္ဘာ ပေါ်က မွတ်ဆလင် မဟုတ်တဲ့ သူတိုင်း
အနည်းနဲ့ အများ မုန်းကြပါတယ် ။
မိန်းမတွေ အများကြိးယူပြီး မျိုးပွားမှု တွေလုပ်ပြီး အင်အားကြီးဖို့ မလိုဘူး
တကယ်လို့ ဖန်ဆင်းရှင် တန်ိခိုးရှင်ကြီး ရှိမယ်ဆို၇င်
သူ့ ကိစ္စကို သူလုပ်လိမ့်မယ် ။
ကျနော့်ကို ဝိုင်းတွယ်နေတဲ့သူတွေကို အပြစ်မမြင်ပါ။
ဘာလို့ လဲဆိုတာ ခင်များတို့ ဥာဏ်က အဲလောက်ဘဲ မှီတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ဒီဘာသာက တခြားဘာသာနဲ့မတူဘူး ။ သွေးနှော ပြီး ဘာသာကျယ်ပြန့်အောင်
လုပ်တာက အဓိကဖြစ်လို့ ၊ ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကရွံကြောက်ကြီးဖြစ်နေရတာပါ
မိမိတို့ သင်ကြားပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆရာတွေ ရဲ့ သဘောထားနဲ့
သူတို့ ၀တ်ဆင်မှုတွေကို ဘာသာရဲ့ အဆုံးအမလို့ မှားယွင်းစွာ ခံယူမိတဲ့ လူတွေကြောင့် ။
ငါးခုန်းမဒဂေါင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး ပုတ်တာလား ၊
တစ်လှေလုံးကြောင့် ငါးခုန်းမ ဒဂေါင်ပုတ်တာလား ဆိုတာလေး သတိချပ်ပါဦး ။
နာနာ (သံတွဲ) says:
ကွန်မန့် ပေးသူတွေထဲမှာ တော်တော် အတဲ့ သူတွေ၊ သေးသိမ် ညံ့ဖျင်းသူ တွေကို
မြင်ရ ၊ တွေ့ ရတော့ ရယ်စရာပါလား။ မန္တလေး ဂေဇက် သိက္ခာ ကျလိုက်တာ ။
ဪ ကိုယ့်မျက်ချေး ကိုယ်ဘယ်မြင်နိုင်ပါ့မလဲ။ သနားလိုက်တာနော် ။
အမှန်မှာက မူဆလင် တစ်ယောက်ဟာ ဘာသာခြားနဲ့ကို ယူခွင့်ကို မရှိတာပါ။
ဦးဦး ပါလေရာ says:
မြန်မာ မွတ်ဆလင်တွေ အမုန်းမခံချင်ရင်
လူပါးဝတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ / ယုတ်မာတဲ့မွတ်ဆလင်တွေကို
သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆန့်ကျင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ကြောင်းပြသပါ။
မြန်မာပြည်သူအားလုံး နဲ့ အတူရပ်တည်ပါ။
အခု ပြည်တွင်းနေ မြန်မာတရုတ်တွေက
စိမ့်ဝင်လာတဲ့ ကိုးကန့်တရုတ်တွေ ၊ ပြည်ကြီးတရုတ်တွေကို ၊
အလကားနေရင်း မွတ်ဆလင်ချင်း တူတိုင်း
၀င်ကာမယ် ၊ ၀င်ပါမယ်ဆိုရင်တော့
မွတ်ဆလင်တွေ မကောင်းတာ ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့တော့ ၊
ခံထားရတာတွေ များ…. များ…. များ….လွန်းလှပါပြီ ။
သူတို့နိုင်မယ်ဆိုရင် အားများရင် တွယ်မယ် အပိုင်စီးမယ်
သူတို့အားနည်းတယ်ဆိုရင် ပြန်ပြီးလျှိုသွားပြီး ဆင်ကြံကြံတတ်တယ်
အခုလည်း တို့ရွာကို သိမ်းဖို့များ လာပြီး အားစမ်းနေတာလားမသိဘူး ။
အဘ ဒီ Post မှာ ရေးထားတာလေးတွေ ၊
သိပ်ပျော့လို့ ၊ အားမရမယ့် ရွာသူား များ ရှိခဲ့ရင်လည်း ၊
အရမ်း အထိမခံဆုံးဖြစ်တဲ့ ၊ ဘာသာရေး ကိစ္စ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါကွယ် ။
မြို့မေတ္တာ ခံယူမယ့် ။
Foreign Resident has written 202 post in this Website..
Bravo, Uncle FR.
One BIG thumb Up for you.
We would like to read such kind of posts in future.
အမေရိကားမှာမွေး အမေရိကားမှာကြီးပြင်း အမေရိကားရေကိုသောက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ အမေရိကားကိုဗုံး
ခွဲတာပါဘဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူဦးရေရဲ့10%ပြည့်သွားတဲ့အခါ ပက်ပက်စက်စက်ပုန်ကန်တာပါဘဲ။ ဘူသီးတောင်မောင်းတောဘက်ကိုနေဘူးတဲ့လူဆိုကောင်းကောင်းသိမှာပါ ၊ရိုဟင်ဂျာတစ်အိမ်ထောင်ထဲကို မိသားစု၂၇ယောက်.. ဓါတ်ပုံရိုက်တာ ပိုက်ဆံမပေးနိုင်လို့ သူ့သမီးကိုခေါ်သွားကြိုက်တာ လုပ်ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့လူမျိုးဘယ်လိုကြီးပြင်းတာဆိုတာ အရေးမကြီးဘူး လူဦးရေပြန့်ပွားဘို့ကိုဘဲသူတို့ကလုပ်မှာပါ။ သူတို့ကမသာလို့ လှူပ်လို့မရရင်ပြားပြားကို ၀ပ်ပြီးညိမ်ခံနေကျတာ။ သူတို့ဘက်ကပြန်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့ကတော့သေပြီသာမှတ်။ ဘူးသီးတော င်မောင်းတောဘက်က ရိုဟင်ဂျာတွေကျောင်းဆရာမကိုမုဒိန်းကျင့်ပြီးသတ်ပစ်တာတွေအများကြီးပါ။ သူတို့ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတဲ့ထဲကိုရဲတောင်မ၀င်ရဲဘူး ။ဒါကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ပိတ်ထားတာ ။မြန်မာဝင်သွားလည်းအသေဘဲ.. ဟင်းချက်နေတဲ့ မိန်းမကအစငရုတ်ရည်နဲ့လှမ်းပက်တာ။ ဒါကို BBC သတင်းဌာနက မျိုးမစစ်တွေ ရိုဟင်ဂျာကိုမြန်မာနိုင်နဲ့ထဲဆွဲထည့်တာ ရင်နာလို့မဆုံးဘူး။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေနဲ့
ဘုရားကျောင်းထဲလိုက်ပြီး ဓမ္မ သီချင်းတွေ ၀ိုင်းဆိုပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
ခရစ္စမတ် ကယ်ရယ် သီချင်းတွေ ဂစ်တာတစ်လက်ကိုင်ပြီး လိုက်ဆိုပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
“We wish you all” “Merry Christmas to you all”
ဆိုတော့ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ
ဥပမာ – ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလုပ်တဲ့
ကြွရောက်ချီးမြှင့် စားသောက်ပေးကြဖို့ သိတ်ပြီး အခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလိုပဲ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းထဲဝင်ပြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကျွန်တော်တို့ကလည်း အခက်အခဲမရှိပါဘူး။
အာမင် လို့ ပြောဖို့ တကယ်ကို ၀န်မလေးကြပါဘူး။
မူဆလင် ဘာသာဝင်တွေကျတော့ တစ်မျိုးဗျ။
သူတို့ ဗလီထဲ ဘာသာခြားတွေ ၀င်ခွင့်မရဘူးလားလို့…။
သေခြာတာကတော့ မူဆလင်တွေရဲ့ ဗလီတစ်ခုတစ်လေထဲကို
ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မရောက်ခဲ့ဘူးတာပါပဲ။
အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာလုပ်တဲ့ အလှူတွေမှာဆိုရင်လည်း
သူတို့ မူဆလင် ဘာသာဝင်တွေ စားရသောက်ရမှာ အခက်အခဲရှိတဲ့ ပုံပါပဲ။
ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးနွေးထွေးသလောက်
မူဆလင်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အေးစက်ပြီး သူစိမ်းဆန်လှတာကတော့ လက်တွေ့ပါပဲ။
ဗလီစာသင်ကျောင်းဂ ကျောင်းသားတွေ အားလပ်ချိန်မှာ အပြင်ထွက် အုပ်စုဝိုင်းဖွဲ့ပြီး လမ်းပေါ်ဖြတ်သွား ဖြတ်လာလုပ်တဲ့ မိန်းခလေးတွေကို စနောက်ကြတယ်။ အဲဒီအထိ လူငယ်သဘာဝမို့ လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ သူတို့ဘာသာဝင် မဟုတ်တဲ့ မိန်းခလေးတွေကို ကိုယ်နဲ့တိုက်မလိုလို လမ်းပိတ်သလိုလို အရသာခံ ထိကပါးရိကပါးလုပ်တာ မတော်တဆပုံစံ လက်သရမ်းဒါ တွေ့ရဒေါ့ အတော်စိတ်ထွက်မိတယ်။ သာမာန်ထက်ပိုတဲ့ မူမမှန်တဲ့စိတ်နဲ့ အခြားဘာသာဝင်တွေကို ရရင်ရသလိုလုပ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အတော်များတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာသမားများရဲ့ ဆုံးမမှုအပေါ် အများဂျီး မူတည်တယ်။ စိတ်မကောင်းပိုဖြရတာ အဲဒီသကောင့်သားလေးတွေဂ တိုင်းရင်းသား ကပြားဂလေးတွေ။ အကုန်နီးပါးဂ အမေတိုင်းရင်းသူ အဖေ မွတ်စလင်ကုလား ဖြစ်တာများတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းတိုင်းမှာ သိပ္ပံ သချာင်္ သမိုင်း စတဲ့ ခေတ်သစ်ဘာသာရပ်တွေကို ဘာသာရေးစာလို အခြေခံကျကျ သင်ဖို့ကြပ်မတ်ရမယ်။
ကျုပ်အမြင်တော့ အား လဲ အနေတော်ပါပဲ။
ဘာသာရေး ကိစ္စလို ဖြစ်နေတာမို့ နဲနဲ အောင့်ထားလိုက်ပါဦးမယ်။
ကျုပ်နားလည်ထားတာက ကမ္ဘာပေါ်က မွတ်ဆလင်ပြဿနာဟာ
ဟဲ့ အဘဖောဆိုက်က တယ်လဲအနီရောင်များပါလား။
နာ့ မန့်…လေးနီရောင် ၁၁ ခုဖြစ်နေတယ်တော့..ဟိ။
မန်းဂေဇက်ထဲတောင် ဘာသာခြားတွေ များနေဘီထင်ပ။ နီရဲနေတာဘဲ။
ဘဖောရေ လက်မထောင်သွားပါတယ် ။ကျွန်တော့်မှာ လဲ အရမ်းခင်တဲ့ ခရစ်ယာန် သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိတယ် သူတို့ တွေ ကျွန်တော်နဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းဝန်းထဲကို ရောက်တာနဲ့ ဖိနပ် ချွတ်ဖို့ သူတို့ကို
ပြောစရာမလိုပါဘူး ။ဒီလိုပဲ ထိုင်ခုံတွေ ရှိတယ် ဆိုရင်တောင် သူတို့လဲ အောက်မှာ ပဲ ထိုင်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီး များနဲ့ တန်းတူ မထိုင်ပါဘူး ။နောက်ထပ်က ဘုန်းဘုန်းများနဲ့ စကားပြောရင်တောင် တင်ပါ့ ဘုရား
တို့ တပည့်တော် တို့ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာဝင်တွေလိုပဲ ရိုရိုသေသေ ပြောတာပါ ။
ကျွန်တော်တို့မှာ စကားပုံ ရှိတယ် မလား ကိုကြောင်ကြီးရယ် လူလိမ္မာ သားယဉ်ပါး လူမိုက်သား ရမ်းကားဆိုတာ ။
လူ ……….ဆိုဒါ ( ဝီစကီနှင့်ရောသော soda မဟုတ်ပါ )
ခင်ဗျားတို့တွေ သူများနိုင်ငံထဲသွားပြီးဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်တယ် ဘုရားတည်ဒယ်ကြဒေါ့
မကျေနပ်ဘူး လွှတ်တော်ထိတက်မယ် မရရင်ဘုံးခွဲမယ်
လူတွေအတွက် ဦးနှောဏ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုရင် ပညာတကယ်တတ်
အဘတို.လို ပညာတတ်ဆန်ဆန်မရှင်းတတ်ဖူး ထစ်ခနဲရှိဗြူးဗြဲပဲလုပ်တတ်တယ်။
ကိုFRကြီး အတွေးနဲ့ အရေးလေးကို လေးစားမိပါ၏။ပိုကြိုက်သော နေရာမို့ ပြန်ကူးပြီး
မန့် လိုက်တယ်နော်။ကျနော်လဲ ဝါးလုံးချီးသုတ်ရမ်းပြီး အမြဲ စစ်ခွေးတွေလို့ သုံးနေမိတာ
ကို အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ ရေ
” ကို FR ကြီး အတွေး နဲ့ အရေးလေး ကို လေးစားမိပါ၏ ”
အခုလို ဘာသာရေး နွယ်တဲ့ Post လေးမှာ ၊
( ဘာသာခြား လို့ ထင်မိတဲ့ ) ကို အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ က
( လက်မခံ တောင်မှ ) အသိအမှတ်ပြုတာ တစ်ခုတည်းနှင့်ထင်
ကျေနပ် ၊ ရေးရကြိုး နပ်သွားပါပြီဗျာ ။
ဝါးလုံးချီးသုတ်ရမ်းတယ် ဆိုတာကလဲ ၊
တစ်ခါတစ်လေ ၊ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရေးချင် ပြောချင်တဲ့ အခါမျိုး ကျတော့ ၊
ဘယ်လိုမှ ရှောင်လွဲလို့ မရတတ်ဘူးဗျ ။
နီလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာမကျေနပ်ရင်လဲသေကျ။ ဒီရိုဟင်ဂျာကိုတော့ မြန်မာပြည်ထဲအရောက်မခံနိုင်ဘူး။ …….*******………..
ကျမလည်း အဘကို လေးစားလွန်လွန်းလို့ အဘဆောင်းပါးကို ဝင်ဖတ်ကြည့်ရာက သိသလောက်လေး… ဗြူးဗြဲ… အဲ… ဆွေးနွေးချင်လို့ပါ။ တို့အဘက ခပ်လန့်လန့်နဲ့ ရေးရတယ်ဆိုတော့ “ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်” လိုများ ဖြစ်နေလို့လားရှင်။ ဘယ်သူ့ကိုများ လန့်နေရတာလဲ အဘရယ်။ တကယ်ဆို တခြားသူတွေကသာ အဘကို လန့်ရမှာပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဘက ဒီမိုကရေစီ ဝေသာလီ… အဲ… အော်ဇီက တကယ့်ပညာရှိ ချော်တဂေး… အဲ… အကျော်ပေဂေးကြီး မဟုတ်လား။ ဒီတော့ အဲဒီ ဝေသာလီ… အဲ… အော်ဇီ အကြောင်းကို ဘယ်သူ့ ဘယ်သူကမှ အဘဖောလောက် ထမပြောနိုင်တာ အမှန်ပါ။ မကြောက်ပါနဲ့ အဘရယ်။ အဘပြောတဲ့ ဗလီကိစ္စကလည်း မှန်မှာပါ။
ဒါနဲ့ အဘပြောသလိုဆို အဘတို့အော်ဇီကျွန်းက တော်တော့်ကို ပေါပေါလောလော နိုင်ငံသား ခံယူခွင့် ပေးတာပဲနော်။ ၉၆% ဆိုလို့ပါ။ အင်း… စိုင်ကော်လို့ ချုံပေါ်ရောက်… အဲလေ… အော်ဇီပေါ် ရောက်တဲ့သူတွေကတော့ ကံကောင်းတာပဲနော်။ စကားမစပ် (မှတ်မှတ်ရရလေး) ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ယုတ်မာကောက်ကျစ်သော၊ ယဉ်ကျေးမှုမရှိသော၊ လူ့အရိုင်းအစိုင်း ဗမာလူမျိုးများလို့တော့ မပြောတော့ဘူးနော်။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာပိုဒ် (၁၂) မှာ ပြောထားတာလေးတွေကိုတော့ နည်းနည်းလောက် ဆွေးနွေးကြည့်ချင်တယ်။ “သွယ်ဝိုက်တာဝန်ရှိသော သဘောတရား” တို့ နောက်ပြီး… “သားသား အပြစ်ကင်းတယ်” တို့ ဘာတို့ ဆိုတော့ အဘက ကလေးဆိုး ရန်ဖြစ်နေသလိုများ ဖြစ်နေသလားလို့ပါ။ အဘပြောတဲ့ ဂျာမနီတို့ ဂျပန်တို့ကတော့ တောင်းပန်ရတာပေါ့ အဘရယ်။ ကျမသိသလောက်က စစ်ကြီး မတိုင်ခင်က ဂျာမနီမှာ ဟစ်တလာကို ဂျာမန်လူမျိုး အများကြီးက ယုံယုံကြည်ကြည် ထောက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာပါ။ ဂျပန်မှာလည်း အဲဒီအချိန်တုန်းက သူတို့လူမျိုး အများစုကိုက ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ စစ်ကြီးကို ဆင်နွှဲခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ ထက်ထက်သန်သန် လုပ်ခဲ့သူများက တောင်းပန်တာကို အပြစ်ပြောလို့ မရသလို “ကိုယ်တိုင်ကလည်း မလုပ်ပါဘူး၊ လုပ်တာတွေကိုလည်း သဘောမတူပါဘူး” ဆိုတဲ့ သူတွေကလည်း အပြစ်မရှိပါဘူးလို့ ဆိုရင် တရားမယ် ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အဘရဲ့ Identity နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရှင်းတာလေးတွေ မေးချင်လို့ပါ။ အဘက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗမာလို့ ခံယူတယ် ဆိုလို့ပါ။ ကျမမှတ်မိသလောက် “စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသားအရေး” ပို့စ်ထဲမှာ ကျနော့် အဘွားမွန်မကြီးရဲ့ မွန်သွေးသားတွေက ပြောတာဆိုပြီး ဗမာလူမျိုးတွေကို “ယုတ်မာသော၊ ရိုင်းစိုင်းသော၊ လူယဉ်ကျေး မဟုတ်သူများ” စသဖြင့် ကင်ပွန်းတပ်သွားတာတွေ ဖတ်ရလို့ပါ။ ကဲ… နောက်တစ်ခါ ကလောင်သစ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ “တို့မြေ တို့ရေ တို့မန်းလေးနဲ့ တို့ယုတ်ယုတ်များ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာကျတော့ “တို့ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ တရုတ်သွေးတွေက ပြောတာ” လို့ အစချီပြီး… “ဖက်ပြိုင်ပြောရမှာ စိတ်လေတယ်၊ သနားတယ်” စတာတွေပြောပြီး ဖက်ကိုက်… အဲ… ပြောလိုက်တာမှာ အဲဒီ စာရေးသူ အသစ်လေးခမျာ “မြန်မာပြည်ဖွား အဘကို တောင်းပန်ပါတယ်” လို့တောင် မန့်သွားတာ ဖတ်ရပါတယ်နော်။
ဒီတော့ အဘပြောပြောနေတဲ့ တောင်းပန်ဖို့ ဆိုတာက အဘကိုများ တောင်းပန်နေစေချင်တာလား၊ အဲလို သူများက အခြောက်တိုက် တောင်းပန်တာကို ခံချင်လို့များ ခုလို ဖက်ကိုက်… အဲ ဖက်ပြိုင်ဖော… ဖက်ပြိုင်ပြောနေရတာလား ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ သစ္စကကြီး… အဲ… အဘရယ်။ (မကျေနပ်ရင် တံဆိပ်နီလေးပါ ခတ်လိုက်ပါဦး ရွာခေါင်းတို့ရေ)
မ သဲနှင်း အိမ် ရေ
အဘ က အဓိက ကတော့ ၊ မွန် တရုတ်စပ်ပါ ။
ရှမ်းသွေးလည်း နဲနဲပါတယ် လို့ပြောပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ရန်ကုန် မှာပဲ မွေး ၊ ရန်ကုန် မှာပဲ ကြီး လာခဲ့ပြီး ၊
စကားကလည်း ဗမာ စကား တစ်မျိုးပဲ တတ်တဲ့အတွက် ၊
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တော့ ဗမာ လို့ပဲ ခံယူထားမိပြန်တယ် ။
ဒီကြားထဲမှာမှ ၊ သြဇီ မှာလည်း အခြေချ နေထိုင် မိပြန်တော့ ။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ၊ တိတိကျကျ အဖြေထုတ်ရရင် ။
” လူ ” လူမျိုး လို့ပဲ အဖြေထွက်မယ့် သဘောရှိပါတယ် ။
အဘ ဟာ အခြေခံအားဖြင့် ၊
ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေး ၊ အသားအရောင် ခွဲခြားလိုစိတ် မရှိပါဘူး ။
လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လူအချင်းချင်း တန်းတူညီမျှမှုကိုသာ စွဲကိုင်ပါတယ် ။
အဘ အဓိက ကိုးကွယ်တာက ” တရားမျှတမှု ” ပါ ။
လူတွေ ခဏ ခဏ ပြောင်းလဲလို့ ရတဲ့ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ Justice ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ ။
လူတွေရဲ့ မနောစိတ်ထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ Fair Go မျှတမှု ကို ပိုဆိုလိုချင်တာပါ ။
အဘ အတွက်ကတော့ ” တရားမျှတမှု ” ရဲ့အထက်မှာ ဘာမှ မထားပါဘူး ။
ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေး ၊ အသားအရောင် ၊ လိင် ၊ ဆွေမျိုး သားချင်း ဘာမှမရှိပါဘူး ။
အဘ လက်ရှိ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင် / ဘာသာ ကိုတောင် ၊
တရားမျှတမှု ရှိတယ်ထင်လို့ ကိုးကွယ်တာပါ ။
တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ ထင်မြင်လာရင် ၊
” ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ” ကိုးကွယ်မှုကိုပါ စွန့်လိုက်မှာပါ ။
အဲဒီလို ” တရားမျှတမှု ” ကိုအဓိက ကိုးကွယ်တဲ့ အတွက် ၊
” ဗမာ ” က လွန်နေပြီလို့ ထင်တဲ့အခါတွေမှာ ၊
” တိုင်းရင်းသား ” တွေဘက်ကနေ ဝင်ပြောပေးမှာ ဖြစ်သလို ။
” တရုတ် ” တွေကို ပြောတာတွေမှာ အစွန်းရောက်နေရင်လည်း ၊
” တရုတ် ” တွေဘက်က ခံပြောပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
” ဗမာ ” လို့ပဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ခံယူထားမိတဲ့ အတွက် ၊
” ဗမာ ” က လွန်နေပြီလို့ ထင်တဲ့အခါတွေမှာ လည်း ၊
” ဗမာ ” တွေရဲ့ ကိုယ်စား ဝင်တောင်းပန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
( အဘ ရဲ့ Post ” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၉ ) ( ဟဲဟဲ ၊ ဟဲဟဲ ) ” ပြန်ကြည့်ပါ )
အဲဒီလိုပဲ ၊ အခု Post လိုပဲ ၊ ဗမာလူမျိုး ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ၊
( တခြားက ) လွန်လွန်ကျူးကျူး ထင်မြင်လာပြီ ဆိုရင်လည်း ၊
” ဗမာလူမျိုး ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ” ဖက်က ကာကွယ်ပေးသွားမှာပါ ။
အဲ ၊ ဘာသာခြားတွေ ၊ လူမျိုးခြားတွေကို ၊
ပြောတဲ့ အခါကျရင်တော့ ၊ ပါးပါးလေးသာ ပြောမိ / သင့်ပေမယ့် ။
” ဗမာ ” လို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ခံယူထား တဲ့အတွက် ၊
ကိုယ့် ” ဗမာ ” လူမျိုး အချင်းချင်း ကို ပြောတဲ့ အခါမှာတော့ ၊
ဘာမှ ငဲ့ကွက်စရာမှ မလိုတဲ့အတွက် ၊ ပိဿလေး နှင့် ဘေးပြစ်သလို ၊
ဆန်ရင်း ကို နာနာ / ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဖွတ်တတ် ပါတယ် ။
Comment ထဲမှာလဲ သေချာ ထပ်ရှင်းထားပါတယ် ။
Condition လေး ၂ ခုပါပါတယ် ။
၂ ။ မိမိတို့ လူမျိုးများ ကျူးလွန်မိတဲ့ အမှားများအတွက် ပြန်မတောင်းပန် လိုသူများကိုသာ
” ယဉ်ကျေးမှု မရှိတဲ့ လူ့ အရိုင်းအစိုင်း မြန်မာ လူမျိုးများ ” ဆိုပြီး အဘက စွတ်စွဲလိုတာပါ ။
အင်း ၊ တောင်းပန်သင့်တယ် မတောင်းပန်သင့်ဘူး ယူဆတာကတော့ ၊
ယဉ်ကျေးမှု ရေချိန် ပေါ်မူတည်ပြီး နဲနဲ ကွာမပေါ့လေ ။
လိုရင်း အချုပ် ဆိုရရင် ၊ အဘ ဟာ ၊
ဘာ လူမျိုး ၊ ဘာ ဘာသာ ၊ ဆိုတဲ့ Ground ပေါ်မှာ ရပ်တည်တာ မဟုတ်ပဲ ။
” အမှန်တရား နှင့် တရားမျှတမှု ” ဆိုတဲ့ Ground ပေါ်မှာပဲ ရပ်တည် ပါတယ်ကွယ် ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေကို ပြန်ဖြေလိုစိတ် မရှိသော်လည်း ၊ ဖြေမိပြန်ပါပြီ ။
” ခပ်လန့်လန့်နဲ့ ရေးရတယ်ဆိုတော့ ၊ “ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ် ” လိုများ ဖြစ်နေလို့လားရှင် ”
အဘက ” ခပ်လန့်လန့် ” လို့ ရေးခဲ့တာက ၊
သြစတေလျှ ဒုက္ခသည် ( Refugee ) အကြောင်း ရေးရတာမို့လို့ ၊
အဲဒီ Field မှာ အဘထက် ပိုသိမယ့် ရွာသား လည်းရှိနေတာ သေချာနေလို့ ၊
အချက် အလက် မှားယွင်းသွားမှာကို စိုးရိမ် လို့ပါကွယ် ။
မ သဲနှင်း အိမ် ထင်နေသလို
“ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ် လိုများ ဖြစ်နေလို့လားရှင် ” တော့ မဟုတ်ရပါကွယ် ။
အဘ လောက် အတွေးအခေါ် ရှိပြီးသူများ အတွက်က
ဒါတွေဟာ မူစရာမှ မဟုတ်တာပဲကွယ် ။
တမင်သက်သက်ကို ၊ ဖြစ်မယ်မှန်း သိသိကြီး နှင့်ကို
ပြောသင့်တဲ့အချိန် ( တနည်း ) Stimulate လုပ်သင့်တဲ့အချိန် ရောက်ပြီ
ဆိုတော့လည်း မလွဲမရှောင်သာပဲ ဝင်ပြောရတာကိုးကွဲ့ ။
ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်း ဆဲဆိုတာတွေပါ ပါလာမယ် လို့ကို ထင်ထားခဲ့တာပါ ။
တော်သေးတယ် ၊ အဲလောက်ထိ မတွေ့ရပဲ ၊
ရိတာ ထေ့တာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြောတာ နဲနဲကိုပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။
အဲဒီအတွက်လည်း MG ရွာသူားများကို လေးစားမိပါတယ် ။
အဲလို ပြောခဲ့တာကိုလည်း ၊
မှန်ကန်သင့်တော်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ၊
အခါ အခွင့်ကြုံတိုင်း ( ပြန်ဖတ်မိစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ) ၊
မကြာခဏ ကိုးကားပေးနေတာကို လည်း တွေ့မိမှာပါ ။
အဘ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကိုယ်တိုင်က ၊
ရွာသူားတွေ တစ်ချက်လောက် ဖတ်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ၊
မတူ ကွဲပြား ခြားနားတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ၊
ဖျတ်ခနဲ တချက်သာ မြင်မိသွားစေလိုရင်းပါ ။
လွယ်လွယ်လေး ပြော / ရေး / ပြုမှုခါနီး အခိုက်အတန့်လေးများမှာ ၊
သြော် ၊ ဒီလို ခံစားချက်လေးတွေလည်း ရှိနေပါသေးလား ဆိုတဲ့ ၊
အမြင်အတွေး လေး တွေ တစ်ချက် ဝင်မိ စေရုံလေးပါ ။
ဆိုလိုရင်းက Awareness ရစေဖို့ လို့ ပြောရရင် မှန်မယ် ထင်ပါတယ် ။
အဘ နှင့် သဘောတူ မတူကတော့ ၊
စာဖတ်သူ တစ်ဦးချင်းစီ ရဲ့ နောက်ခံ Back Ground ၊
ကြီးပြင်း သင်ယူလာတဲ့ အခြေအနေ နှင့်
ရင့်ကျက်မှု အခြေအနေ ပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားသွား ပါလိမ့်မယ် ။
ကဲ Comment လဲ ရှည်သွားပြီ ။
မ သဲနှင်း အိမ် ရဲ့ အရေးအသားလေးတွေက မဆိုးပါဘူးကွယ် ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ အခုလို ရိတာ ၊ ထေ့တာ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြောတာတွေ ထက်စာရင် ၊
ရွာသူားတွေ အတွက် ပိုအကျိုးရှိစေမယ့် Post လေးတွေ ရေးတင်ပါလားကွယ် ။
တော်သေးဘီ နော် ။
အဓိက ကိုးကွယ်တာက ” တရားမျှတမှု ” ပါ ။
လူ လူမျိုး အချင်းချင်း မေတ္တာရင်း၊ ချစ်ခြင်း အနန္တ တည်စေသော်..
မိုက်သဟ…သဲရေ…ကြိုက်သွားပြီ…:)…I love u…အဲလေမှားလို့…i like it…:P
လိုအပ်ရင် အကြိုက်ဆောင်ပြီး ၀င်လုံးတတ်သေးတယ် ။
စည်းလုံးညီညွတ်မှုကတော. ကြောက်ခမန်းလိလိဘဲ …..ကိုယ်.ယုံကြည်မှုနဲ.ကိုယ် ကိုးကွယ်ကြတာဆိုပေမဲ.
တခြားလူ အနှောက်အယှက် မဖြစ်အောင် နေသင်.တယ် ။
၀င်အော်နေကြမဲ.အစား ကိုယ်.လူကိုယ် ထိန်းသင်.တယ် ။
အနည်းနဲ့ အများ ဖြစ်နေလို့ ကိုယ်မပြောရင်လည်း သူများတွေ ပြောမှာ မို့ ၀င်မပြောပဲ နေနေတာပါ။
တတ်နိုင်သလောက် ၀င်မပါပဲ ပရိတ်သတ် လုပ်ပါအုန်းမယ်။ ဆက်ရန် ဆက်ရန်….
မ ဆူး ရေ ၊ မှန်ပါတယ် ။
” အနည်း နဲ့ အများ ဖြစ်နေလို့ ”
အဘ လည်း ဒီ Post မှာ ဖော့ပြောထားပါတယ် ။
အရင် Post တော်တော် များများမှာကတော့
အဘက အနည်းစု ဘက်ကရေးရတာ များတော့ ခပ်မာမာရေးတာပေါ့လေ ။
( ဥပမာ ။ ။ တရုတ် ၊ တိုင်းရင်းသား ၊ အမျိုးသမီး အခွင့် အရေး )
အခု Post မှာကတော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာ လူများစုဖက်က ရေးရတာဆိုတော့
တတ်နိုင်သလောက် ဖျော့ / ဖော့ ရေးရတာပေါ့ ။
နောက်ပြီးတော့ ” ဘာသာရေး ” ဟာ
ကမ္ဘာမှာ အထိခိုက် မခံနိုင်ဆုံး ၊ Sensitive အဖြစ်ဆုံး Issue ပါ ။
ဘာသာရေး စစ်ပွဲကြီးတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ အရက်စက် အကြမ်းတမ်းဆုံး စစ်ပွဲတွေပါ ။
အဲဒီတော့လည်း ၊ ဖော့မှ ဖြစ်မယ်လေ ။
အခုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗမာလို့ ခံယူလိုက်ပြန်ပြီပေါ့နော်။ ဒါဆိုရင် အဲလိုမျိုး ခံယူထားတယ်ဆိုရင် ဘာရယ်ကြောင့်များ အရင်ပို့စ်တွေတုန်းက အရမ်းကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ စကားလုံးတွေသုံးပြီး ဗမာတွေကို စွပ်စွဲခဲ့တာလဲရှင်။ အတော်ပဲ အံ့သြမိပါတယ်။ အဘရဲ့ တရားမျှတမှုဘက်က ရပ်တည်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း လေးစားမိပါရဲ့ရှင်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် အဘရယ်။ တရားမျှတယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဟိုလူက အားများရင် ဟိုလူ့ဆီ ပြေးကပ်လိုက်၊ ဒီဘက်က အားများတယ်ထင်ရင် ဒီဘက် ပြေးကပ်လိုက် လုပ်တာမျိုးတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ရှင်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး အရောင်ပြောင်းတဲ့ ပုတ်သင်ညိုလိုပေါ့။ တစ်ခုပဲ အဘက ခေါင်းမညိတ်တတ်တာလေးပဲ ရှိတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလို တရားမျှတမှုဘက်ကနေ ပြောပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးကို ဒီဆိုဒ်ထဲက တချို့ဆောင်းပါးရှင်တွေလည်း သူတို့ပို့စ်တွေမှာ ပြောသွားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဘက အခုမှ ပြောတာလို့ ထင်ပါတယ် အဘရယ်။ အင်း… ခက်ပါပေ့ နောင်မှာ “တရားမျှတမှု” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကြီးကို ဂေဇက်မှာ အဘတစ်ယောက်တည်း မောင်ပိုင်စီးသွားမှာ စိုးမိချေရဲ့။ အဘက… ဘာတဲ့… “လူ”လူမျိုး ဆိုတော့။ အင်း ဖြစ်ရပြန်ပြီ… “လအူ”… အဲ… “လူ” လူမျိုးတဲ့လား အဘရယ်။ အဲဒီလို General မျက်နှာဖုံးကြီးစွပ်ပြီး ဗမာတွေကို ခွတ်ချင်ရင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်လိုက်၊ တခြားလူမျိုးတွေကို ခွတ်ချင်ရင် ဗမာဖြစ်လိုက်၊ အဲဒါတွေက အဘပြောတဲ့ Fair Go တဲ့လား။
ထားပါတော့ အဘရယ်။ တောင်းပန်ရမယ့် ကိစ္စကတော့ ကြောင်ကိုရေချိုးခိုင်းသလို အဘက ဘယ်လိုပြောပြော လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပြီးသားပါရှင်။ ဒါကြောင့် အဘအတွက် ဆောင်ပုဒ်လေးတောင် ကျမထွင်ထားသေးတယ်… “တောင်းပန်ဖို့ကို အမြဲပြော အဲဒါ အဘဖော” တဲ့။ ကဲပါလေ။ ကျမမေးချင်တယ်။ ပထမဦးဆုံး စာစရေးတဲ့ မိန်းမသားတစ်ယောက်က အဘကို တောင်းပန်ပါတယ်လို့ မန့်ထားတာကို ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးပို့စ်မှာ အဲဒီပို့စ်ကို ပြန်ညွှန်းပြီး ဖတ်ခိုင်းတာက အဘပြောတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရေချိန်လားရှင်။ နောက်ပြီးတော့ “ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုင်ကြည့်မနေတော့ မသေချာဘူး” ဆိုတဲ့ ခေါင်းရှောင်စကားမျိုးတွေ ပြောပြီး ဗမာတွေကို လူမျိုးနဲ့ချီလို့ ရက်စက်သော၊ ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာသော စတဲ့ စကားလုံးတွေကို သုံးပြီး စွပ်စွဲခဲ့တာ အဘပြောတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု စံချိန်လားရှင်။ မဟုတ်ပါဘူးလို့ မငြင်းပါနဲ့ အဘရယ်။ အဘဆောင်းပါးကို အဘကိုယ်တိုင် ပြန်ကြည့်ပါဦးနော်။ အဲဒီ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖူးတဲ့ စာဖတ်သူတွေ အားလုံး အဘရဲ့လေသံကို သိပါတယ်။
အဘထက် ပိုသိနေတဲ့သူရှိလို့ “ခပ်လန့်လန့်” လို့ ပြောတာပေါ့နော်။ ကောင်းပါတယ် အဘရယ်။ ကျမကလည်း အဘပို့စ်တွေ အပါအဝင် ဂေဇက်ထဲကပို့စ်တွေကို အခွင့်သင့်သလို ဖတ်နေတာကြာပါပြီ။ ဒီလို… “မှားတာရှိရင် ပြင်ပေးပါခင်ဗျာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးကို ဒါ ပထမဆုံး အဘသုံးဖူးခြင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျမအမှတ်မှားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဘက အရင်ပို့စ်တွေမှာ ကိုဖိုးသိကြီးလိုလို ဦးဘာမဆိုသိကြီးလိုလို ပြောသွားသလားလို့ပါ။ အင်း… နောက်ဆိုရင် ကျမကထောက်ပြလိုက် အဘက စကားကို ပြင်ပြောလိုက်၊ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေပြီ အဘရေ။
“အဘလောက် အတွေးအခေါ်ရှိသူအဖို့ ဒါတွေဟာ မှုစရာမှ မဟုတ်တာကွယ်”… “ကိုယ်က တရားမျှတမှုဘက်က ရပ်တည်ပါတယ်” ဆိုတာတွေက ကိုယ်တိုင်သိပ်ပြီး ပြောစရာ မလိုပါဘူး အဘရယ်။ အများက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ အများက ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းက ကြိုက်ရမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အဘက အတွေးအခေါ် ရှိပြီးသားဆိုတော့ နားလည်လွယ်မှာပါ။ ဘယ်လိုလူမျိုးမှလည်း လူတိုင်းကြိုက်အောင် မနေနိုင်ပါဘူး။ ဆယ်ယောက်မှာ ရှစ်ယောက် (သို့) ခုနစ်ယောက် လောက်က လက်ခံရင် ရပါတယ်။ ဥပမာ။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတောင်မှ မကြိုက်တဲ့ ရှင်ဒေဝဒတ် ရှိသေးတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီလိုပါပဲလေ။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ အေဗရာဟမ်လင်ကွန်း တို့လို လူတိုင်းချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတောင်မှ မုန်းတဲ့သူက ရှိခဲ့သေးတာပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်လုပ်တာ ဘယ်လောက်မှန်တယ်၊ တရားတယ်ဆိုတာ အများက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ရှင်ဒေဝတ်ကြီးတောင် ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သူ့ကို ထောက်ခံတဲ့ တပည့်တွေက ရှိခဲ့သေးတာပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုဘယ်သူက ဘယ်လိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်း ထည့်ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး အဘရယ်။ အများက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
ကဲ… ကိုအောင်ဘုရေ… ရှင်က ကျမကို ခနဲ့တဲ့တဲ့ လုပ်နေတာလားဆိုလို့ မဖြေချင်ပေမယ့် ဖြေရဦးမယ်။ ရှင်တောင် ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ စာဖတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုမှ အားမနာ မကြားဝံ့မနာသာ ဆဲဆိုနေသေးတာ ကျမက ခနဲ့တယ်ဆိုလည်း ရှင့်လောက်တော့ မဆိုးသေးဘူး ထင်ပါတယ်။
ကဲ… အဘဆီပြန်လှည့်တာပေါ့။ အဘရေ… ကျမက Post ရေးရေး၊ မရေးရေး စာဖတ်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် အနုပညာသည်ကို ပရိသတ်က ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ပြောခွင့်ရှိသလိုမျိုးပါ။ ဒါရိုက်တာကို ဝေဖန်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တတ်ရမှာလား အဘရယ်။ စာရေးသူဆိုတာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲလေ။ အများရဲ့ အဆုံးအဖြတ် အဝေဖန်ကို ခံနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဝေဖန်မခံနိုင်ဘူးဆိုကတည်းက ကိုယ့်စာကိုယ် အယုံအကြည်မရှိဘူးလို့ ကျမက ထင်ပါတယ်။
မ သဲနှင်း အိမ် ရဲ့ အခု Comment ထဲမှာ မှားယွင်းနေတာ တချို့ ပါရှိနေပြီး ၊
အဘ အနေ နှင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ကွယ် ။
” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၉ ) ( ဟဲဟဲ ၊ ဟဲဟဲ ) ”
Post ထဲမှာ ဖြေထားသလိုပါပဲကွယ် ။
” လန်ဘားကျောက်တံတားတွေ ရှောက်ပြောပြီး ဝေ့မနေနှင့် ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြောတဲ့သူတွေနှင့် ဝေ့နေတဲ့သူတွေ
၁ ။ အဘ လည်း မအားဘူး ။
၂ ။ အဘ လည်း တန်ဘိုး မမဲ့ဘူး ”
အဘ ဟာ Idea အတွေးအခေါ် ကို
Idea အတွေးအခေါ် နှင့်ပဲ ပြန်ဖြေရှင်းလေ့ ရှိပါတယ်ကွယ် ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Personal ဆန်တဲ့ဟာတွေကို ၊
ဒီလို Post / Comment နှင့် ပြန်ဖြေရှင်းပေးဖို့ကတော့ ။
အဘ တကယ်ကို မအားတာပါကွယ် ။
ပြန်ဖြေလောက်အောင် တန်ဘိုး မကြီးလှဘူး လို့လဲ တကယ် ထင်မိလို့ပါ ။
အဘ အနေနှင့် ပထမ Comment မှာ ပြန်ဖြေပေးထားတာက
၁ ။ အဘ ရဲ့ ရပ်တည်ချက် Ground ကို သိစေချင်တာ နှင့်
၂ ။ မ သဲနှင်း အိမ် များ ပညာရှိဆန်ဆန် အရေးအသားဖက်ကို
စိတ်များပြန်လည်လာမလားလို့ ဆွဲဆောင်ကြည့်တာပါကွယ် ။
အဲဒီတော့ ၊ အခု လက်ရှိ Post
ရဲ့ Idea နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ၊ ဆွေးနွေးစရာ Idea များရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ၊
နို့မို့ ဆိုရင်တော့ ။
( အဘ ဘက်ကတော့ ) တော်သေးဘီနော် ။
အဘ တကယ် မအားတာပါကွယ် ။
စကားလေးတွေ လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး အခု ဆွေးနွေးတဲ့ ခေါင်းစဉ် ဘက်မှာသာ တည့်တည့်မတ်မတ် ဆွေးနွေးကြရအောင်..
နည်းနည်းတော့ ပြောချင်တယ်။ ကျမက ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကပဲ ပြောနေတာပါနော်။ ဟိုး အပေါ်ဆုံးမှာ ကျမပေးထားတဲ့ ကွန်မန့်မှာ ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ပါမယ်။ စာပိုဒ် (၁၂) ဆိုတာ ပါပါတယ်နော်။ ဒီပို့စ်ထဲက စာပိုဒ် (၁၂) ကနေ စပြီး အောက်ပိုင်းကို ကျမတို့ ဆွေးနွေးနေတာပါ။ အဲဒီမှာ ရေးထားတဲ့ “သွယ်ဝိုက် တာဝန်ရှိသော သဘောတရား” … “သားသား အပြစ်ကင်းတယ်” … “တောင်းပန်ဖို့” စတဲ့ စကားလုံးတွေကို ဆွေးနွေးတာပါ။ ဒီစကားလုံးတွေက အဘဖောရဲ့ အရင်နာမည်ဆိုး… အဲ… နာမည်ကြီး ပို့စ်ဖြစ်တဲ့ “စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသားအရေး” ပို့စ်ရဲ့ အဆက်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ကိုစံလှကြီးရေ… ခင်ဗျားအဘက ခုချိန်ထိ ယောင်နေတုန်းရှင့်) ပြောရရင် စကားကြီးဆယ်မျိုးထဲက “ဆီပွတ်ကျည်ပွေ့” ပြောနည်းနဲ့ ကိုယ်လိုရာကို မရရအောင် ထည့်ပြောတဲ့နည်းပါပဲ။ ကျမ ဟိုးအပေါ်ဆုံးက ကွန်မန့်မှာလည်း ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခု ဒီမှာ ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်က လက်ရှိအစိုးရရဲ့ လုပ်နေတာတွေကို လုံးဝကို မထောက်ခံတာပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အများစုကြီးကကို ယုံယုံကြည်ကြည် ထက်ထက်သန်သန်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်စတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ တူကို မတူတာပါ။ ဒါကို သိစေချင်ပါတယ်။ တကယ်က ဒီပို့စ်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေအကြောင်းမှန်ရင် စာပိုဒ် (၁၂) ကနေအောက်ပိုင်းအထိအကြောင်းအရာတွေက ဘာမှမဆိုင်တာကြောင့် ဖြုတ်ကို ဖြုတ်သင့်ပါတယ်။
အဘက အဘအတွက်တော့ တကယ်တော်တယ် !!
၀င်ဖတ်တာ ၃ခါရှိပီ လက်မနှစ်ချောင်းထောင်သွားတယ် ဒါတောင်နှစ်ချောင်းပဲရှိလို့ ပါ..
” အဘ က ၊ အဘ အတွက်တော့ ၊ တကယ်တော်တယ် !! ”
အဘ တကယ်တော် တယ်လို့ မခံယူရဲပါဘူး ၊ သမီးလေး ချာတူးရယ် ။
တကယ့် တကယ်က ဘုရား ရဟန္တာ နတ်ဘုရား နှင့်
လူထဲက ဆိုရင်လည်း အိုင်စတိုင်း လို ချွင်းချက် တချို့က လွဲရင် ၊
သာမာန်လူတွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ် ။
အရေးအကြီးဆုံး တစ်ချက်ကို ပြောကြည့်မယ်နော် ။
Ground ကောင်းတာလို့ ပြောင်းမြင်ကြည့်ပါလားဟင် ။
မြေဘုတ် ငှက်ဟာ သူ့အတွက် သင့်တင့် မှန်ကန်တဲ့ ဒေသ မှာ ဆိုရင်
စွန်ရဲ ကိုပင် အနိုင် ယူနိုင်တယ်ကွယ့် ။
အင်းးးး ဒီ Comment လေး မရေးခင်မှာ တစ်ချက် စဉ်းစားမိသေးတယ် ၊
မုန်းနေကျ လူတွေကတော့ ၊ ပိုမုန်းတော့မှာပဲလို့ ။
ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူတွေထဲက ၊
တစ်ယောက်တစ်လေလောက်က နဲနဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊
လျှပ်တစ်ပျက်စာ တစ်ခဏစာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊
အတွေးကလေး တစ်ချက် ရသွားရင်တော့ ၊
အမုန်းခံရကျိုး နပ်ပါတယ်ကွယ် ။
ဒါနှင့် စကားမစပ်ပါ ၊ အဘ လည်း ၊
တရားမျှတမှု အကြောင်းကို တွေးနေမိတော့ ၊
ဒီတစ်ခါကျရင်တော့ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ မေတ္တာကို အပြည့်အဝ ရနေတဲ့
တရုတ် လူမျိုးတွေ အကြောင်းကို ( သီးသန့်လေး ) ၊ ယထာဘူတ ကျကျလေးပေါ့ ၊
နဲနဲ တို့ထိကြည့်မလားလို့ ။
ဟဲဟဲ ။ တရုတ် တွေအပေါ် အမြင်မကြည်လင်ကြသူများ ( ဦးကြောင် အပါအဝင် ) ၊
မေတ္တာ ရှိကြသူများ ၊ အားလုံးပေါ့ ၊ မလွတ်တန်း ဖတ်နိုင်အောင် ၊ ကြော်ငြာ ဝင်ထားတာပါ ။
ကြာတော့ ကြာအုန်းမယ်နော် ။ မျက်စိတွေ ညောင်းနေလို့ ။
ကိုဖေါရိန်းကို တရုတ်အသံပေးရုံနဲ့ နှင်းဆီနီလေး တန်းပြီးချီးမြှင့်ထားပါလား…။
တရုတ် စက် တရက်စုပ် တရုတ်တွေ သိပ်ဆိုးတယ် လူဇိုးတွေ ဘယ်လို တရုတ် ကို ပြောပြော နာတယ်လို့ကို မထင်ဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် တရုတ်လို့ မခံယူထားလို့ပါ။
မျိုးရိုးဗီဇ မျက်နှာကတော့ လိမ်မရပေမဲ့ တရုတ် မကောင်းကြောင်း ပြောလျှင်တော့ နိုင်ငံ ပြင်ပက ပေါက်ဖော်ကြီးကို ပြောတယ် လို့သာ တွေးပြီး နာရမယ်လို့ကို မသိတော့ပါဘူး။
နင်ဘယ်ကလာလဲ မြန်မာနိုင်ငံက လာတယ်
နင်ဘာလူမျိုးလဲ ငါ မြန်မာကွ
အဲလိုပဲ ရဲရဲတင်းတင်း နေရာ တကာ ဖြေခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
အဘက လွယ်လွယ်ကူကူလေး ဖြေရှင်းနိုင်မှာပေါ့။ အဘက ပညာရှိကြီးပဲဟာ။ အဘလို အတွေးအခေါ် ရှိပြီးသား သူတွေအတွက် ဒါတွေကို ဘယ်မှုမှာတုန်း။ ထားပါလေ။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငြင်းလို့ မနိုင်တော့ရင် ပြောတာလေး ပြန်သတိရတယ်။ “တော်ပြီ နင်နဲ့ မငြင်းချင်ဘူး။ အဆင့်ကို မရှိဘူး။ ပညာရှိဆန်ဆန်လည်း မငြင်းတတ်ဘူး” လို့ ပြောခဲ့တာလေးတွေ။ ခုလည်း ထပ်တွေ့နေပြန်ပြီ။ အဘက အတွေးအခေါ်ရှိပြီးသားဆိုတော့ ကလေးတွေလို ဘုတောပစ်တာမျိုးက မကောင်းဘူး ထင်တယ်နော်။
အဘရယ် ဘယ့်နှယ်ကြောင့် မအားတာတွေကို ထည့်ပြီး ဆင်ခြေပေးနေရတာတုန်းရှင်။ ကျမပေးတဲ့ ကော်မန့်တွေကလည်း ဒီပို့စ်ထဲက စာပိုဒ် (၁၂) နဲ့ အောက်ပိုင်းတွေ ကို အခြေပြုပြီး ဆွေးနွေးတာပါ။ ဒီပို့စ်ရဲ့ Idea ကို ပဲ အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးနေတာပါ။ တကယ်က လန်ဘားကျောက်တံတားတွေ ပြောနေတာက အဘဆိုတာ ပြန်သတိထားပြီး ကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်။ သူများတွေ လက်တို့ပြောမှ သိရတယ်ဆို ပညာရှိသိက္ခာ ကျပါတယ် အဘရယ်။ ကျမကတော့ ဘယ်တော့မှ မဝေ့ပါဘူး အဘရယ်။ ကိုယ့်သံသယ ရှိတာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကို မေးခဲ့တာပါ။ ခုလည်း အဘပြောသွားတာလေးတွေကို ပြန်ပြီး မေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
“အဘက Idea ကို Idea နဲ့ ပဲ ပြန်ဖြေရှင်းတတ်တယ်” လို့ ဆိုတယ်နော်။ ဟုတ်ပါပြီရှင်။ ကျမအထင်တော့ ဒီ Idea တွေဟာ “တိုင်း၍ရက်သည့် ပက္ကလာ မိုးရွာသည်နှင့် အခန့်သင့်” ဆိုသလို ပေါ်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ သေချာပြောရဲပါတယ်။ ကျမပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ကျမက စာဝင်မရေးပေမဲ့ ဒီမန်းလေး ဂေဇက်ထဲက စာတွေကို ဝင်ဖတ်တာ ကြာလှပါပြီ။ အင်း… အဲဒီ အဘညွှန်းထားတဲ့ “နာနာ (သံတွဲ)” ဆိုတဲ့ ကလောင်ရှင်ဟာ ပေါ်လာတာ အသစ်ဖြစ်သလို အဲလို မီးမွှေးတဲ့ ပို့စ်မျိုးကိုလည်း အခုထိ ပထမဆုံးတွေ့ခြင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ (ကျမ အမှတ်မမှားရင်ပေါ့ရှင်) အဲဒီမှာပဲ ရွာထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကလည်း ဝေဖန်ကြပါတယ်။ (ကျမလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာပါ)။ ကျမစဉ်းစားမိတာ ခုလို Hot Issue ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူလိုရာချည်း ဆွဲပြောထားတဲ့ နာနာသံတွဲရဲ့ အဲဒီပို့စ်က ဘာကြောင့် တက်လာတယ်ဆိုတာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီလိုပို့စ်တင်ရင် ဒီလိုဝိုင်းဆဲမယ် ဆိုတာ သူမတွေးမိတာလား၊ အဆဲခံရအောင် တမင်ပဲ လာတင်တာလား။ တွေ့စက ဆန်းတယ်လို့ ထင်ပေမဲ့ အော်… ဒါလည်း သူ့အမြင် သူပြောတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး စည်တော်ယွမ်းပြီး အဘရဲ့ ပို့စ် ထွက်လာတော့တာပါပဲ။ ကျမဘာတွေ စိတ်ထဲ မြင်မိတယ် ထင်သလဲ အဘရေ။ ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးတဲ့ မြန်မာကားတွေထဲမှာ မင်းသမီးကို ဗီလိန်တွေက နှောက်ယှက်နေတုန်း ဝင်ကယ်တဲ့ မင်းသား ရောက်လာသလိုပါပဲ။ မျက်စိထဲ အဲဒါပဲ မြင်နေတယ်။ အဘရေ… ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။
ဒီပို့စ်ထဲက တခြားစာတွေကို မဆွေးနွေးပါဘူး။ ဆိုင်ရာ ဘာသာဝင်များကပဲ ဆွေးနွေးကြပါ။ အရင်ပို့စ်တုန်းကလည်း “တိုင်းရင်းသားတွေကို ဒီလောက်လေးတောင်မှ မသဒ္ဓါကြဘူးလား” ဆိုပြီး ပြောလိုက်တာမှာ ကျမတို့ ပြည်ထောင်စုဖွားတွေက အဘကို ထောက်ခံကြပါတော့တယ်။ သူတို့ အသည်းကို ဆွဲလှုပ်လိုက်တဲ့ စကားကိုး။ အဲဒီပို့စ်တုန်းက ကျမ ကွန်မန့်ဝင်မပေးပါဘူး။ ရွာထဲက ပညာရှင်တချို့ကတောင် “တူးဖော်ကြ… ဆွေးနွေးကြ… ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့” ဆိုပြီး လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးပေးကြသလို Home Page မှာတောင် အကြာကြီးကပ်နေခဲ့သေးတာပဲ အဘရယ်။
အဲဒီမှာလည်း အဘစကားတွေ အတော်လေး ရှေ့နောက်မညီဖြစ်နေတာ တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုစံလှကြီးကို နာမည်တပ်ပြီး ရေးထားတာကြောင့် ကာယကံရှင်ကပဲ ပြန်ဖြေရှင်းမယ်လို့ ယုံကြည်လို့ပါ။ သူပြန်ဖြေရှင်းသွားတာတွေလည်း ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းလွန်းလို့ အဘက ဘာများ ပြန်ပြောမလဲလို့ လာကြည့်တော့ ဟဲ… ဟဲ… ဟဲ… နေတာပဲ တွေ့တာနဲ့ ကျမလည်း မနေနိုင်ဖြစ်ရာက ဂေဇက်မှာ ကွန်မန့်မိတာပါပဲ။ ခုမှတော့ မထူးတော့ပါဘူး။ တစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန်ပဲလေ။ အဲဒီ ကိုစံလှကြီးရဲ့ ပို့စ်မှာလည်း အဘဖောက Personal တိုက်ခိုက်တယ်လို့ ပြောသွားပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီ Personal ဆိုတာကို အဘနဲ့ ခုရှင်းမှ ဖြစ်မယ်။
အဘက ကျမကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောတယ်လို့ဆိုတယ်။ တကယ်က ကျမပြောသွားတဲ့ စာကြောင်းတိုင်းမှာ“လူ” ကိုဝေဖန်ပြီး ပြောသွားတာ မရှိပါဘူး။ “မူ” ကိုသာ အဓိကထားပြီး ဝေဖန်သွားတာပါ။ အဲ… တစ်ခုပဲ အဘတို့က “လူ” ဝါဒ သမားတွေဆိုတော့ ခက်တယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ အဘတို့ရဲ့ “မူ” က “လူ” ကို အခြေခံနေတာကိုး။ ဒီတော့ အဘတို့ရဲ့ “မူ” မမှန်တာတွေကို ပြောတဲ့အခါ “လူ” မမှန်တာတွေပါ ပါလာလိမ့်မယ်။ ဒါကိုတော့ လက်ခံမှ ရမယ် အဘရယ်။ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ထပ်ပြီး အရှောင်အတိမ်း မလုပ်ပါနဲ့တော့ အဘရယ်။ အဘပို့စ်တွေမှာ အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ “အော်ဇီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို အားနာသင့်ပါတယ်။
အဘမအားသလို ကျမလည်း မအားပါဘူး အဘရယ်။ ဒါပေမဲ့ “ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်လှ၏” ဆိုသလို အမြင်မတော်တာ တွေ့နေသရွေ့ကတော့…
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ အဘရယ်။ ကျမလည်း မအားပါဘူးနော်။
အမဂျီး သတ္တိစိရင် ဒေါက်တာ အီးဒုံးနဲ့ပြိုင်ကလော်မလား
မဟုတ်ရပါဘူးရှင်။ ရှင်ထင်သလို ရန်ဖြစ်တာ ဝါသနာပါလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမက အဘဖောရဲ့ ပို့စ်တွေက Awareness ရစေချင်တဲ့ စေတနာတွေ တပုံကြီးပါမှန်းသိလို့ ဝင်ဖတ်ကြည့်ရကာနေ စာပိုဒ် (၁၂) နဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ဒီပို့စ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေ ပါနေတယ်ထင်လို့ ဝင်ဆွေးနွေးတာပါ။ နောက်ပိုင်းက ဟာတွေကတော့ အဘက တစ်ခုပြောလိုက်၊ ကျမက သံသယရှိတာလေးတွေ အဘကို မေးလိုက်နဲ့ မဆုံးနိုင်ဖြစ်သွားရတာပါ။ ကျမစိတ်အထင် အဘဖောဟာ အဆိုတော်လုပ်ပြီး “ရောချင်ရာရော ဘဖော” ဆိုပြီး စီရီးထုတ်ရင် ရောသမမွှေတဲ့ သားစိုးတောင် ထိုင်ငိုသွားမယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့လေ စိန်မခေါ်ပါနဲ့ ကိုအောင်ဘုရယ်။ ကျမက ကြောက်တတ်ပါတယ်။ ကိုအောင်ဘုတောင် တခြားပို့စ်တွေမှာ ဆဲဆိုနေသေးတာ ကျမရန်ဖြစ်တာကိုလည်း နားလည်ပေးပါ။ (ခဏခဏ မဖြစ်အောင် စိတ်ကိုလျှော့ထားပါတယ်ရှင့်) တကယ်က ဒီပို့စ်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြောင်းပဲ ဆိုရင် ကျမ ဝင်ပြီး မဆွေးနွေးပါဘူး။ တခြားသူတွေ ဆွေးနွေးနေတာကိုပဲ ကြည့်နေမှာပါ။
ဒီလိုရှိဒယ် သဲ …. ရဲ့ :D
စာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီး ဒေါသဖြစ်တယ် ဆိုကတည်းက
ငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခြင်း လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့်
သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကြက်ခေါင်းဆိတ်မခံ ပြန်ပြောတာဟာ
( မိမိစကားကို တန်ဖိုးထားသူအတွက်ပါ )
( ပြဿနာလို့ထင်ရင်ပြဿနာမည်ပေသပေါ့ )
ဒီအဖိုးကြီးက :D )
ဗမာလူမျိုးတွေ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ပြောတယ်ပေါ့နော
ဒီအဖိုးကြီးက ဘယ်လိုလုပ် အယူသည်းမှာတုန်း
ဆိုတော့ကာ ခင်ဗျားတို့ တွေ
လူမျိုးစုတွေဟာ ဗမာ လူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုသဘောထားတယ်လို့သိထားလဲ
ဗမာတွေကို မုန်းနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားရွာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသလား
ပြောရရင်တော့ အောလပုံပေါ့ ဒါက အနည်းအကျဉ်းလေးပါ
( အယူသည်းတယ်ဆိုတာကိုခိုင်လုံအောင်၇ှင်းပြနိုင်ရမှာနော )
ဒါ ခင်ဗျားတို့ စာဖတ်ပြီးပွားနေတာဘဲရှိသေးတယ်
တကယ့်အမှန်အကန် မျက်နှာခြင်းဆိုင် ဖြေ၇ှင်းကြဘို့ဆိုရင်
နောက်ဆုံး သူများကိုကြတော့ အယူသည်းတယ်ပြောပြီး
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လူမျိုးတစ်ခုကို ရှေ့တန်းတင်
ကျွန်တော်လဲ မသဲနှင်းအိမ်နဲ့ အမျိုးတူ စာဖတ်သမားတစ်ယောက်ပါပဲ… မတူတာကတော့ ကျွန်တော်က အဘဖောပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ… ထို့ အတူ ကိုစံလှကြီးရဲ့ပရိတ်သတ်လဲဖြစ်ပါတယ်… ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော့်ကို အကျိုးရှိတဲ့ အချက်အလက် တစ်စုံတစ်ရာပေးတဲ့လူတိုင်း ကျွန်တော့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေမို့ပါပဲ…
ကျွန်တော် အဘFRကိုလေးစားကြောင်း ပြောဖူးသလို သူ့ ပရိတ်သတ်ဖြစ်ကြောင်းလဲ ကြေညာပါတယ်… သူကပ္ပတိန်ဖြစ်ဖြစ်.. သြဇီနေနေအရေးမကြီးပါ.. စိတ်မ၀င်စားပါ… သူ သြဇီအကြောင်းခဏခဏပြောနေလဲ အမြင်မကပ်ပါ… မပြောတော့မှာကိုပဲစိုးရိမ်မိပါတယ်… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့… အစိုးရအဆက်ဆက်ပြောလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆိုတာ အခုမှစတည်ဆောက်နေရတာပါ.. ဒီအချိန်မှာ အောင်မြင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့အလေ့အထ နည်းပညာ အချက်အလက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် အရင်းအမြစ်တွေပါပဲ… အဲဒိတော့ အဲဒိနိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်တဲ့လူတွေ အကြောင်းသိတဲ့လူတွေဆီက အချက်အလက်တွေဟာ အမှန်တစ်ကယ်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်… ဥပမာ အဘFR သြဇီအကြောင်း ကို အကြောင်းအရာတိုက်ဆိုင်တိုင်း ယှဉ်ထိုးပြောပြတာ အမြင်ကတ်စရာမဟုတ်ပါဘူး.. မသိသေးတဲ့ ပြည်တွင်းကလူတွေ အတွက် အကျိုးရှိပါတယ်… သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးမပါလှပေမဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားထဲမှာ နေပြီး အသိပညာနိမ့်ပါးနေတဲ့ လူတွေ များသိခွင့်ဖတ်ခွင့်ရလိုက်ရင် အင်မတန်အကျိုးများပါမယ်… ကျွန်တော် အဘFR ကိုလေးစားတယ်ပြောတဲ့နေရာမှာ သူလုပ်သမျှ ရေးသမျှအကုန်ထောက်ခံလေးစားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်ထောက်ခံနေတာမဟုတ်ပါ… သူ့ ဆီကလူအများစုအတွက် Acceptable ဖြစ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အမြဲတစေရနေတယ်လို့ သိထားလို့ ပါ… ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်တော့ သူ့ ပို့စ်တွေပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး အခုလောလောဆယ် ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်တွေဘေးဖယ်ထားပြီး သုံးသပ်ကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းပါ၇စေ…
တနည်းအားဖြင့် MG ထဲမှာ သဂျီးကိုလဲသဂျီးမို့လို ..အမေရိကန်တရားဟောတယ်.. သြဇီကလူလဲ သြဇီတရားဆိုပြီး… ပြောကြ ခနဲ့ ကြတာတွေမြင်တိုင်း ကျွန်တော် အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်.. လူကိုမကြည့်ပဲမူကိုကြည့်တယ်ဆိုလျှင် ဘာကြောင့် ဒါမျိုးတွေ ပြောနေကြရတာပါလဲ…
နောက်တစ်ခု ပြောရလျှင်တော့ မသဲနှင်းအိမ်စာရေးအားကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်… ပြီးတော့ အရေးအသား ညက်ညောမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ မသဲနှင်းအိမ် ကွန်းမန့်ပေးတာက personal မပါဘူး မူကိုပဲဝေဖန်ပါတယ် ဘယ်လောက်ပြောပြော satire ဆန်ဆန်နဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တော့ သဘောမကျဖြစ်မိတာပါ… ဒီလိုပုံစံကိုမှရေးချင်တယ်ဆိုလျှင်တော့ satire ကိုပဲ ရေးပြီး ပိုစ့်တွေတင်ပါ.. ကျွန်တော် အမြဲအားပေးနေပါမယ်… မသဲနှင်းအိမ်ရဲ့ကွန်းမန့်ဟာ မူကိုဆွေးနွေးတယ်ဆိုပေမဲ့ သရော်စာဆန်ပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ ပိုအားသန်နေတာ မြင်နေရတဲ့ အတွက် ရုတ်တရက်ဖတ်လို့ကောင်းပေမယ့် အသိပညာ တစ်ခုမှကောက်ယူမရလိုက်ပါ… ရှေ့ လျှောက် သရော်ခြင်း၊ ရိခြင်းမပါပဲ မသဲနှင်းအိမ်ရဲ့စာတွေ ဖတ်ရဖို့မျှော်နေပါမယ်…
ကျွန်တော်လဲ အမကို ကွန်းမန့်ပေးရင်း နာမည်ရှေ့ တပ်စရာတစ်ခုရသွားပြီဗျို့ 
(ပျော်စေပျက်စေပါဗျာ… စကားအတင်းစပ် ကိုစံလှကြီးကိုလဲ ဒီနေရာကနေ ပိုစ်တွေထပ်ရေးဖို့တောင်းလိုက်ပါတယ်… နဲနဲကြာနေပြီလားလို့ .. တတိုင်းပြည်လုံးအသိပညာ အတတ်ပညာ အင်မတန်ငတ်မွတ်နေတဲ့အချိန်မှာ သိတဲ့တတ်တဲ့လူတွေ ပြောကြ မျှကြပါဗျာ… တိတ်တိတ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး.. )
ကျမအနေနဲ့ ဒီပို့စ်က ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြောင်းပဲ ရေးမယ်ဆိုရင် ဝင်ကို ဆွေးနွေးဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မဆိုင်တဲ့အရင်ပို့စ်က ပြောပြီးသား အကြောင်းတွေက ပြန်နွယ်လာလို့ ဝင်ဆွေးနွေးဖြစ်တာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျမစိတ်ထဲ ဘဝင်မကျတာတွေက အများသားရှင့်။ ပို့စ်တစ်ခုတည်းတင်ပြီး ပျောက်သွားတဲ့ ကလောင်ရှင်ကလေး ကိစ္စကတည်းက ကျမက မကျေနပ်တာပါ။ သူ့ဘာသာ လာမရေးဖြစ်တော့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျမကတော့ ရေးကာစ ကလောင်သစ်ကလေးကို ကြောက်အောင် လုပ်လိုက်တာလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဘဖောရဲ့ “စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသား အရေး” ကိစ္စကိုလည်း မကျေနပ်ပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါရစေ။ ဒီမှာ ပြောချင်တာက ကိုစံလှကြီးရော၊ အဲဒီပျောက်သွားတဲ့ ကလောင်ရှင် လက်သစ်ကောင်မလေးကိုပါ ကျမ လူချင်းမသိဘူး ဆိုတာပါ။ အဘဖောကိုလည်း လူချင်း မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ထားပါ။ ကျမရဲ့ ခံစားမှုကို ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကို NAJA မကြိုက်တဲ့ Satire တွေ ဖယ်ပြီး ပြောပါမယ်။
စပြောရမယ်ဆိုရင်… အဘဖောရဲ့ “စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသားအရေး” ပို့စ်ကနေ စရပါလိမ့်မယ်။ (မှတ်မှတ်ရရ အဖြစ်ဆုံးလို့ပဲ ဆိုပါတော့) အဲဒီပို့စ်ကို “မူ” အနေနဲ့ရော၊ သုံးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကိုရော မကြိုက်ပါဘူး။ ကိုယ်လွတ်ရုန်းတဲ့ စကားလုံးတွေ ပါတဲ့အပြင် စကားတွေလည်း ရှေ့နောက် မညီပါဘူး။ ဒါကိုလည်း ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် ဘယ်စကားလုံးတွေ ရှေ့နောက်လွဲနေတယ် ဆိုတာကို ကျမပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒါတွေကို ပြောချင်လို့ ကော်မန့်တွေလည်း လာပေးခဲ့ပေါင်း မနည်းပါဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒီပို့စ်ဟာ (ကျမအမြင်ပြောရရင်) သမိုင်းအကြောင်း ရေးကာစ လူတစ်ယောက်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရန်တိုက်ပေးတာပါ။ ကျမအနေနဲ့ အဲဒီ ကိုစံလှကြီးဆိုတဲ့ သမိုင်းရေးကာစ လူတစ်ယောက်တော့ ပျောက်သွားတော့မယ်လို့တောင် ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျမဒီကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ သေသေချာချာနဲ့ အဲဒီတုန်းက ကွန်မန့်တိုင်းကို သေချာလိုက်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေရာမှာ ကိုစံလှကြီးက စာဖတ်သူ ရွာသားတစ်ဦးကို တောင်ပန်တာလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကာယကံရှင်က “လူမှားနေပြီထင်တယ်။ ကျနော် ကို FR မဟုတ်ဘူး” လို့ ပြောခဲ့တယ်။ အင်း ကြာပြီဆိုပေမယ့် ကျမက မှတ်မိနေတာ ခက်တယ်ရှင့်။ အဲဒီမှာ ကိုစံလှကြီးက လူမမှားပါဘူး။ အဲဒီဆောင်းပါးကို သီးသန့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နဲ့ တုန့်ပြန်ပါမယ်လို့ ပြောလို့ သူ့ဆောင်းပါးကို စောင့်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါး အကြောင်းကတော့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ လူတိုင်း အမြင်တစ်ခုစီ ရှိကျပေမယ့် ကိုစံလှကြီးရဲ့ အဲဒီဆောင်းပါးက အမြင်တွေကိုတော့ အားလုံးနီးပါး သဘောကျပါတယ်။
နောက်ပြီး အဘဖောရဲ့ ဆောင်းပါးဟာ တော်တော်လေးကို မျက်နှာသာပေးတာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျမပြောရင် လွန်မယ် မထင်ပါဘူး။ ကိုစံလှကြီးလို အသစ်ရေးကာစ ကလောင်ရှင်တစ်ဦးကို နာမည်တပ် ဝေဖန်တဲ့ ဆောင်းပါးကို Home Page မှာ အကြာကြီးတင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မက ရွာထဲက “တူးကြ၊ ဖော်ကြ၊ ပျော်ပျော်ကြီးပေါ့…” ဆိုပြီး ရွာထဲက တချို့ပညာရှင်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကလည်း အများသားဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ရေးကာစ လူတစ်ယောက်ကို အုပ်စုနဲ့ အနိုင်ကျင့်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ (ဂေဇက်က အဲဒီမန်ဘာတွေက အပြင်မှာ တွေ့ချင်မှ တွေ့ဖူးမယ် ဆိုပေမယ့် အရင်ရောက်ပြီး အချင်းချင်းလည်း သိနှင့်နေတာကြောင့်ပါ) တော်တော့်လူဆို လွင့်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကိုစံလှကြီးကတော့ ကံကောင်းရှာပါတယ်။ “တစ်ကောင်တည်း ခြင်္သေ့” မို့လို့လား မသိပါဘူး။ (ကျမ အခမဲ့ ဝင်ကြော်ငြာပေးသွားပါတယ် ကိုစံလှကြီးရေ။)
ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ ကျမက အဘဖော ပြောသလို တရားမျှတမှု မရှိရင် မုန်းတတ်ပါတယ်။ ကိုစံလှကြီးရဲ့ တုန့်ပြန်တဲ့ ဆောင်းပါးထွက်လာတော့ သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဆောင်းပါးက မျက်နှာသာ မပေးခံရပါဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဂေဇက်မှာ ပို့စ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဆက်တိုက်တက်လာတာ ညတွင်းချင်းပဲ သူ့ဆောင်းပါးက Home Page ကနေ ပျောက်သွားရရှာပါတယ်။ (ကျမပဲ အယူသည်းလွန်းတာလား မသိဘူး) ကျမက ဒါကို မတရားဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူ့ကို နာမည်တပ်ပြီး ဝေဖန်တဲ့ဆောင်းပါးကိုကျတော့ Home Page မှာ အကြာကြီးတင်ပေးနိုင်ရင် ကာယကံရှင်ဘက်က ပြန်လည်ချေပမှုကိုလည်း တန်းတူ အခွင့်အရေး ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်လို့ပါ။
ကို NAJA က “လူကို မကြည့် မူကိုကြည့်” ဆိုလို့ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ Satire တော့ မပါလို့ မဖြစ်ဘူးလေ မဟုတ်ဘူးလား။ လူကြီးမင်း လူဝါဒ သမားများရှင့်… “လူကိုခင်ရင် မူကို ပြင်မယ်… လူကိုမုန်းရင် မူကိုသုံးမယ်” ဆိုတာမျိုးကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ရှင်။
နောက်များလည်း ပြောစရာရှိက ပြောလာမိဦးမှာပဲ ကို NAJA ရေ။ ဂေဇက်မှာ ပို့စ်တစ်ခု လာတင်ဖို့ကတော့ လာမည် ကြာမည်၊ ခုတော့ ကွန်မန့်နဲ့ပဲ နေဦးမည်လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ကိုစံလှကြီးကိုလည်း ပို့စ်တွေထပ်ရေးဖို့ ကျမကလည်း ဒီနေရာကပဲ ထပ်တောင်း ဆိုချင်ပါသေးတယ်။
ဟာ ကျနော်က ရွာသားအသစ်ပါ။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ဝင်ရေးချင်စိတ် ပေါ်လာလို့ပါ။ မသဲနှင်းအိမ်ရဲ့ ကွန်မန့်တွေက ဖတ်လို့ကောင်းလှချည်လားဗျ။ Congratulation ပါမသဲနှင်းအိမ်ရေ။
ကျုပ်ကတော့ ခင်ဗျားတို. စကားစစ်ထိုးနေတာ သဘောကျတယ်ဗျို.။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ ကိုယ်မသိ
သေးတာတွေရော မျှတတာကို မျှတမှန်းသိလာတာ..မမျှတတာကို မမျှတာမှန်းသိလာတာမို.လို.။။
မဟုတ်ရင် အပြောကောင်းကောင်းလေးနဲ.လေထဲမျောမျောပါသွားလို. ။ ဒါနဲ.မသဲနှင်းအိမ်ကိုတော့
မသဲနှင်းအိမ်ပြောတာရော၊ကိုFRကြီးပြောတာ ရော ဖတ်လိုက်တာ
ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဖွဲ့တွေအခြေကုတ်လာယူနေတာဖြစ်မှာပဲစိုးမိတယ်။ အဟီး..ရေးရတာလည်း ကြောက်တော့ကြောက်သား…။
ကို nature ရဲ့ ။
” မီဒီယာ ကို မီဒီယာ နှင့် တိုက်မယ် ”
ဆိုတဲ့ အပြော အထိ ကိုတော့ ၊
လက်ခံပါတယ်ဗျာ ။ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ။
( အောက်လမ်းနည်းတွေ ၊ မသုံးသရွေ့ပေါ့လေ )
ကျွန်တော် ပို့စ်မတင် ကွန်းမန့်ပုံမှန်ဝင်ရေးလေ့မရှိတဲ့အတွက် ရွာသားအများစုနဲ့မရင်းနီးပေမဲ့… ဖေစ့်ဘုတ်ထက် ဂေဇက်ကို ပိုတွယ်တာအမှန်ပါဗျို့ 
အထက်က ကွန်းမန့်ဝင်ပေးဖြစ်တာလဲ အဘဖော ကွန်းမန့်တစ်ခုမှာ သြဇီအကြောင်းမပြောဝံ့သလိုဖြစ်တာမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းလို့ စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀င်ပြော၇တာပါ… ကျွန်တော့်အကြောင့်တော့ တောင်တောင်အီအီလျှောက်မတွေးကြစေလိုကြောင်း..
nature ရေ… ဘယ်အဖွဲ့မှ ခြေကုတ်လာမယူပါဘူးရှင်။ ထင်ယောင်ထင်မှား မဖြစ်ပါနဲ့။ ကျမကလည်း မမျှတဘူး ထင်လို့ ဝင်ရေးတာပါ။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စရာ မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်လို့တော့ ရချင်ရပါမယ်။ (အဲ… အဲဒါက ပြည်တွင်းက ဟိုဂျုပ်ကြီး လေသံနဲ့ တူနေပါလား၊ ထားပါလေ) အောက်လမ်းနည်းနဲ့ တိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောတဲ့သူတွေသာ မေးကြည့်ပါတော့။ သူတို့ပဲ သိပါလိမ့်မယ်။
ကျနော် မနေ့က အမကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး ဖတ်လို့ကောင်းတာနဲ့ ဒီနေ့လာပြန်ဖတ်တော့လည်း အရေးအသား ကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးထားတာတွေ့လို့ Congratulation ပါအမရေ။ အမတို့ ပြောနေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း ရှာဖတ်ကြည့် ပြီးပါပြီ။ အမပြောတာတွေလည်း သူ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့ မှန်နေတယ် ထင်တယ်။ Bravo ပါမသဲနှင်းအိမ်ရေ။
M T ရေ…
ဖတ်ပြီး အားပေးတာအတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဖတ်ကောင်းလို့ ဖတ်တာထက် သေချာလေး စဉ်းစားပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်လည်း ဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အမတို့ ပြောတဲ့ဆောင်းပါးတွေကို အားလုံး ဖတ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ အမပြောတာတွေ ဟုတ်မှာပါ။ အမက မျက်စိတော့ အမြင်သန်ပါပေ့ဗျာ။ အမှတ်တမဲ့ ကြည့်ရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးက ဘာသာရေးလို့ ထင်ရပေမယ့် အမပြောမှ ကျနော်နောက်တခေါက် ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ စာပိုဒ် (၁၂) ရဲ့အောက်ပိုင်းတွေဟာ ဘာသာရေး မဟုတ်တော့တာ တွေ့ရတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတွေရဲ့ ကျေနပ်မှုရအောင် ပြန်ကြိုးစားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အင်း သူ့ဘဝလေးကလည်း သနားတော့ သနားစရာပါ မသဲနှင်းအိမ်ရယ်။
ဂေဇက်မှာ အက်တစ်မန်ဘာလုပ်ရင်တော့ မျက်စိလေးနဲ့ စာထိုင်ဖတ်ရုံ လက်ကလေးနဲ့ စာထိုင်ရေးရုံနဲ့ မပြီးပြန်ဘူး။
တခါတခါတော့နှာခေါင်းနဲ့လဲ ဘာနံ့လေးထွက်သလဲလို့ စူးစမ်းရသေးတယ်။
ကျုပ်တော့ ကျောဘက်ကိုကြည့်ထားဘို့ စီစီတီဗွီတစ်လုံးဝယ်ထာရမလားတောင် စဉ်းစားနေမိတယ်..။
နံရံ နဲ့ ကပ်ထားပြီးပါကြောင်း …
ဒီပိုစ်မှာသဂျီး ရဲ့ ဆရာ တွေ လာ မဆွေးနွေးကြပါလား။ နည်းနည်းလေး ရှုပ်သွားအောင် ပိုရှုပ်သွားအောင် ဖတ်ရင်းနဲ့ သွက်သွက် ခါ သွားအောင် တိုင်ပတ်ခိုင်းလိုက်တာပါ။
အခုတော့ ဖတ်ရတာ မူးလို့ ပြေးပြီ ဗျို့..
ပြောလိုက်ဦးမယ်..စကားပြောတာ မျောက်လွှဲကျော်လိုမလုပ်နဲ.။ ကိုယ်ယုံကြည်တာကို ကိုယ့်ဘာသာကို
ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပြီးပြော…ဟိုလိုလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ရပါဘူးကွယ်..ဒီလိုလား ဆိုတော့လည်း
မဟုတ်ရပါဘူးကွယ်…မလုပ်နဲ.။အဲလိုဆိုတော့ ဘယ်ဒင်းက ဟုတ်နေသလဲ :-)
နောက်ပြီး ဗမာတွေက တောင်းပန်ရမယ်ဆိုတာ..ဘာလို.တောင်းပန်ရမှာလဲ။။ ကိုယ်မလုပ်ထားတဲ့ အမှုကိစ္စ
ကိုယ့်မှာ တာဝန်မရှိဘူး..လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုသွားပြော။ ဗမာအချင်းချင်းဖြစ်လို. တာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်…
သူတို.ကောင်းစားနေတာကြတော့ရော ကိုယ့်မှာ ဘာများအကျိုးခံစားခွင့်ရှိခဲ့လို.လဲ
Japan Apologizes to South Korea on Colonization – The New York …
Aug 10, 2010 – Prime Minister Naoto Kan apologized as part ofastatement marking the … also under Japan’s colonial rule before the division of the peninsula..
History of Libya as Italian colony – Wikipedia, the free encyclopedia
Tripoli was largely under Italian control by 1914, but both Cyrenaica and the Fezzan … The Italian colonization of the Ottoman provinces of Tripolitania and Cyrenaica …. In July 1998, the Italian government offeredaformal apology to Libya.
ဥရောပက.. သူတို့ကိုလိုနီတွေအပေါ်.. တောင်းပန်သင့်/မသင့် ဆွေးနွေးချက်လေးတွေ..
Should Europeans offer their apologies for their colonization …
http://www.historum.com › World History › European History
10 posts –5authors – Sep 16, 2011
Why are their stillalot of countries who still want payments or apologizes from their old colonizers. What is the use? Of course slavery isabad.